က်မ္းစာေလ့လာျခင္း Bible.Study (24)
ခရစ္ယာန္စာေပ Literature (37)
ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual.Sermons (40)
သက္ေသခံျခင္း Testimony (68)
(သတိရတိုင်း ၅မိနစ်စီ နားထောင်သင့်တဲ့ ဒေသနါ ၃ခုပါ..အသက်တာကို Daily ပြောင်းလဲစေပါမယ်)။
ဆရာမြတ်နေ (Covid19 နဲ့ လူသိများလာသူ)
အလွန်အကျိုးရှိစေတဲ့ ရှင်းလင်းတိုတောင်းစွာ ရှင်းပြပါတယ်။ ဆက်လက် ကျမ်းစာဖတ်ရှု ဆင်ခြင်ကြရင် သာ၍အကျိုးရှိပါတယ်။ Born Again အသစ်မွေးဖွားခြင်း အကြောင်းပါ။ သူ့ FB. ၅မိနစ်ဒေသနါ ကို နေ့စဥ်နားထောင်သင့်တယ်။ သီချင်းကြိုက်သူများလည်း ဒေ သ နာ နဲ့ညီတဲ့ တပုဒ်အမြဲထည့်ပေးတယ်။ ...ဆရာမြတ်နေ က ရှင်ယောဟန် အခန်းကြီး ၃ (ရေနဲ့ဝိညာဥ်.. ဆိုတဲ့ နှုတ်ကပတ်တော နဲ့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်) ထိတွေ့ခံစား ပြောင်းလဲတဲ့ လူသစ်၊ ဘဝသစ်ကို နိကောဒင် ဆိုတဲ့ အသက်ရွယ်ကြီး၊ ကျမ်းတတ်ပုဂိုလ်ကြီးကို ရှင်းပြပါတယ်။ .
ကောင်းချီး ချည်းပဲရေတွက် ချီးမွှမ်း ဝမ်းမြောက်နေတာ ကောင်းတယ်၊ ငါဟာ အပြစ်သား ဘဝက လွတ်ပြီ 100% ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ပြီထင်ပြီး ဝါကြွား ခုန်ပေါက်နေသော်လည်း.. နေ့တိုင်း မိမိလုပ်မိတဲ့ အပြစ်တွေကို ဘော်ပြပေးတဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ် (ရေနဲ့ဝိညာဥ်) ဖတ်ရှု ဆင်ခြင်ဖို့၊ ၅မိနစ်.. ၅၀မိနစ် ..စတဲ့ ဒေသနါလေး နားထောင်နေရုံမက လက်တွေ့ အသက်တာရရှိဖို့၊ ..နေမ့ရက်တိုင်းဟာ အသစ် အသစ် ဖြစ်နေပြီး မိမိလမ်းလွဲနေတာတွေ ပဲ ပြင်ဆင်ကြဖို့ (သူများလမ်းလွဲနေတာ သိပ်မကြည့်ကြဖို့) ခွန်အားရရှိပါတယ်။
ဟာ လေ လု ယ။
Born Again (အသစ်မွေးဖွားခြင်း) https://www.facebook.com/102983578020262/videos/1215745898786724/
Baptism ဗတ္ကိဇံခံခြင်း (နှစ်ခြင်းမဂ်လာ) နဲ့ အရင်နေ့ကပြောတဲ့ (အသစ်မွေးဖွားခြင်း) တို့ဟာ မတူပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း..၅မိနစ် ဒေသ နာ
၅မိနစ်ဒေသနာ ဖြစ်ပေမဲ့..နာရီများစွာ.ရက်များစွာ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ခဏခဏ နားထောင်ရပါမယ်။
Posted by Witmone at 3:10 PM No comments:
နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ရပ်တည်နေသူ ချစ်စမ်းမောင်
မြန်မာပြည်မှာတော့ နာမည်ကျော အိုင်းယွန်ခရော့ တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင် အဆိုတော်မျိုးကြီး၊ အငှဲ၊ တို့ကအစ နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ရပ်တည်နေသူပါ။ ဆရာသမား ဖြစ်သူ စောဘွဲ့မှုး (ကွယ်လွန်) နဲ့ ဆရာဒေးဗစ်ရုံမိုး( MYC) အသင်တော် (ကွယ်လွန်) တို့ကို အမြဲ အောက်မေ့သတိရ ကျေးဇူးတင်တတ်သူ၊ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလဲ အမြဲကျေးဇူးတင်တတ်သူ၊ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အမြဲအားကိုး ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ ချစ်စမ်းမောင် (lead guitor) တီးခတ် ပြရင်း သက်သေခံစကားလေးတွေ၊ သီချင်းလေးတွေ..ကြည့်ရသူ၊ ကြားရသူတိုင်း ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ အာ မင်။
Posted by Witmone at 3:08 PM No comments:
နေ့စဉ်ခွန်အား ဩဂုတ်လ ၈ ရက်၊ စနေနေ့..လူမည်သည်ကား
ဩဂုတ်လ ၈ ရက်၊ စနေနေ့
ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ [ ၂ကော ၅:၁၇ ]
✝️ သူ့သေခြင်းက အသက်ကိုယူဆောင်ပေးသည် ✝️
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သူအနေဖြင့် အသစ်ဖန်ဆင်းသောဘဝကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်သန်ကြသည်။ သို့သော် ထိုအရာအတွက် ခရစ်တော်ပေးခဲ့ရသော အဖိုးအခကို ဘယ်သောအခါမျှ မေ့မသွားသင့်ပါ။ သူ၏အသေခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ “ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့် ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ် သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း” (၂ကော ၅ :၂၁)။
Posted by Witmone at 2:37 PM No comments:
ကျွန်ုပ်သည် Ps 23.Daily (နံနက်နိုးထချိန် နှင့် ညချမ်းမအိပ်မှီ)
slowly talk ps 23
Very powerful pray
ps 23 ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပါ
ဆာလံ ၂၃ စကားလုံးများဟာ
အနှစ် ၅၀ အသုံးမကျ၊
ငါ အတူနေတာ ၃နှစ်ကြာပြီ
ဆာလံ၂၃ ကို နေ့တိုင်း နားထောင်ပြီး
ယောဘ 3:20-26 အလွတ်ရပြန်ပြီ
ရောမ 12 အဆုံးပိုဒ်လည်း အလွတ်ရစပြုလာပြီ
King David every day pray
I needs Ps 23.Daily (Wake up & before sleep)
We all need Ps 23
Wake-up & Before-sleep
Before eat also
ငါတို့ရှိသမျှသည် Ps 23 လိုအပ်ပါတယ်
Posted by Witmone at 2:35 PM No comments:
ဘဝဆိုတာ B ဆိုတဲ့ မွေးဖွားခြင်း Born နဲ့ စတင်ပြီး D ဆိုတဲ့ သေဆုံးခြင်း Dead နဲ့ အဆုံးသတ်ရတယ်။ အဲဒီ ၂ခု အကြားမှာ C ဆိုတဲ့ မိရဲ့ ရွေးချယ်မှု Choice နဲ့ အဆုံးသပ်ရတယ်
မိမိဟာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး၊ မိမိလိုချင်တဲ့အရာကို မရ ရအောင် လုပ်တတ်တဲ့ ဇွဲရှိပါတယ်။ ငယ်စဉ်က သိပ္ပံပညာရှင် တက္ကသို ပါမောက္ခ ဖြစ်လိုပေမဲ့ မိမိအားကျခဲ့တဲ့ မုံရွာဒေသကောလိပ် ဆရာ၂ဦး (ဦးခင်မောင်ဆွေ နဲ့ ဦးယဉ်ဝင်းမောင် -သချာင်္ဌာန) တို့က မင်းတွက်ချင်တဲ့ သချာ (Maths) RIT မှာ ဌာနအကြီးကြီးရှိတယ်။ အင်ဂျင်နီယာပဲရွေးပါ တိုက်တွန်းလို့ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်လာတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများစွာ မြို့ကြီးတွေကို သွားရောက်နိုင်ရုံသာမက မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားတွေရဲ့ ဘ၀ အာမခံရဖို့ နယူးယောက်မြို့နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုဝင်းရှိန် နဲ့ ဇနီး မစိုးစိုး တို့ရဲ့ လောကအာမခံ World Financial Group မှာ ၁နှစ်တာ လေ့လာ ကူညီခွင့် ရခဲ့တယ်။ ပြည်ပမှာ အခြေချရတာ တကယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှပါတယ်။ ကျနော်သာ အသက်၃၀ ငယ်ရွယ်သူ (မိဘက ငွေ.အာဏာ မကြီးရင်) ပြည်ပမှာပဲ လွတ်လပ်မှု အရသာ ဆက်လက်ခံစား ချင်ပါတယ်။ သို့သော် အသက်ရွယ်အရရော. တိုင်းပြည်အခြေအနေအရရော. သုံးသပ်ပြီး အမိ မြန်မာပြည် ပြန်လာ အခြေချပါတယ်။ ၄နှစ်အကြာ နေထိုင်တဲ့ ပုသိမ်မြို့မှာ တလ ၂သောင်းခွဲနဲ့ Wifi ကေဘယ်အင်တာနက် ဈေးချိုစွာ ရရှိပြီဆိုတော့ အရင် ပြည်ပနေသလို အင်တာနက် မထစ်မငေါ့ပဲ ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ထွက်လာမဲ့ "လူဟာလူပဲ" အခန်းဆက် လေသူရဲတစ်ဦး ဦလှဝင်း ဖေ့ဘုတ်က ဖတ်ရတယ်။ သူဟာ အသွင်ပြောင်းနိုင်ပြီး အငြင်းသန်၊ ပညာကြိုးစား၊ မဟုတ်မခံ၊ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၊ အားကစား (ဂေါက်သီး.တင်းနစ် ထူးချွန်)၊ စစ်တိုက်လဲတော်၊ စီးပွားရေးလည်းတော်၊ နိုင်ငံရေးလည်းတော်ပြီး သူဘဝရွေးချယ်မှုများစွာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းလဲကို အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ သြဇာအလွန်ကြီးမားပြီး စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းရွှေ အပေါ် သေသည့်တိုင် သစ္စာရှိသွားမဲ့ စိတ်ဓါတ်က သူရဲ့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု လို့ ရေးချင်ပါတယ်။ အထက်လူကြီးကို ချစ်ကြောက်ရိုသေလေးစား နာခံမှုပါ။ အင်အယ်ဒီအစိုးရက နေရာမပေးတော့ ပါတီကြီးထောင်ပြီး ငွေအား၊ လူအားနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ဖို့ ရွေးချယ်တယ်။ အခု သူ အမတ်အရွေးမခံတော့ဘူး ကြေငြာတယ်။ ပါတီ အခြေအနေကောင်းရင် ပါတီခေါင်းဆောင်လဲ အခြေအနေကောင်းမှာပဲ မဟုတ်ပါလား။
သူ့သားအငယ် ၁၀တန်း ၃ဘာသာ ဂုဏ်ထူးထွက်ကြောင်း ကြွားတယ်။ သားအကြီးက အဖေ့ခြေရာနင်း BE အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ အားကောင်း၊ စာလဲကြိုးစား ဆိုတော့ စင်ကာပူက အင်တာဗျူးမှာ လစာကောင်းကောင်းနဲ့ အလုပ်ခ ရသွာခဲ့တယ်။ ဦးစိုးမြင့် ကိုယ်တိုင်လဲ စာတော်ပြီး RIT ဘွဲ့ရပေမဲ့ လပွတ္တာမြို့ လယ်သမားပြန်လုပ်တယ်။ ကြည့်မရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ သူငယ်ချင်းက ပြန်ခေါ်လို့ ရန်ကုန်မှာ ဘက်စုံအင်ဂျင်နီယာကြီး လုပ်ကိုင်နေတယ်။ သူရဦးရွှေမန်းလိုတော့ ဘဝမအောင်မြင်ပေမဲ့..မိမိဘဝကို ကျေနပ်နေသူမို့ မိမိအမြင်ကတော့ သူ့ဘ၀ အောင်မြင်တယ်။ သူ့ရွေးချယ်မှု တွေမှာ ဆရာကောင်းတွေက သူဌေးကြီးတွေ မပါ၊ ကံကြမ္မာကလည်း သူဌေးကြီး ဇာတာမပါ။
ရွေးချယ်မှု အမှားကြီးတခု ဖြစ်သွားဖူးတဲ့ မိမိအကြိုက်ဆုံးတေးသံရှင် စိုင်းထီးဆိုင်။ မူးယစ်အမှုနဲ့ ထောင်ကျခဲ့ဖူးပေမဲ့ တနှစ်ဆိုတာ ငယ်စဉ်ဘဝမှာ ခဏလေးပါ။ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်ကြီးဘဝနဲ့ သူချစ်တဲ့ မြန်မာလူထုကို သေသည့်တိုင် သီချင်းလေးတွေ ပေးဆပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူလို လောကအောင်မြင်မှုက ကံဉာဏ်ဝီရိယ အများကြီး လိုပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက မျိုးရိုးဗီဇ ကောင်းပြီး အသီးသီး ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့ အသီးများကတော့ စာဆိုတော်ကြီး စိုင်းခမ်းလိတ် ရဲ့ ကဗျာ စာသားများဖြစ်တယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သာယာနာပျော်ဖွယ် အသံနဲ့ "သဘာဝရင်သွေးငယ်" တီးဝိုင်းပေါင်းစပ် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ရတယ်။
ဆရာမြတ်နေ 8-8-2020 ၅မိနစ် Online တရားဟောချက် မှာ စဉ်းစားစရာ ဖီလိုဆိုဖီ တစ်ခု တွေ့ရတယ်။
ဘဝဆိုတာ B ဆိုတဲ့ မွေးဖွားခြင်း Born နဲ့ စတင်ပြီး D ဆိုတဲ့ သေဆုံးခြင်း Dead နဲ့ အဆုံးသတ်ရတယ်။ အဲဒီ ၂ခု အကြားမှာ C ဆိုတဲ့ မိရဲ့ ရွေးချယ်မှု Choice နဲ့ အဆုံးသပ်ရတယ် လို့ သူကြားဖူးတဲ့ စကားတခုကို ကိုးကား တရားဟောပါတယ်။
LIFE.(ဘဝ)= B +C + D
ဖတ်ရှုသူ အများစုက ခရစ်ယန်မဟုတ်ကြပါ။ မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာ၊ဝါဒ နဲ့ လူပုဂိုလ် များအတိုင်း ရွေးချယ်ကြရမှာပါ။ ..
အခု ပို့စ် က ယူနီကုတ် မြန်မာစာ ဖြစ်တော့ ဒီစာကို ကျနော့်မိတ်ဆွေ နိုင်ငံခြားသားတွေလဲ မြန်မာစာ မဖတ်တတ်ပေမဲ့ ဖေ့ဘုတ်က သူနားလည်တဲ့ ဘာသာကို Translate လုပ်ပေးမှာပါ။ အခုခေတ်ကာလ ကမ္ဘာကြီး လာချင်ရင်အနီးကလေး ဖြစ်နေပါပြီ။
ရွေးချယ်မှု ကောင်းပေမဲ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်လဲကောင်းပေမဲ့၊ ကံကြမ္မာသိပ်ကောင်းသူကိုတော့ ယှဉ်မရပါဘူး။ တခါတလေ ဟစ်တလာ အိုစမာ တို့လို လူ့သမိုင်း မကောင်းဘူး ဆိုသော်ငြားလည်း သူတို့ကို ထောက်ခံတဲ့ အုပ်စုက ရှိနေဆဲပါ။ ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မ ၊ လူကောင်းလူဆိုး ခွဲခြား ရွေးချယ် ကြရမှာပါ။
.ဖတ်ရှုသူများ အသက်ရှင်သရွေ့၊ နိုးထလာတိုင်း ကျန်းမာပြီး ရွေးချယ်မှုကောင်းနိုင်ပါစေ။
Posted by Witmone at 3:13 AM No comments:
အမွေ..အိမ်ခြံမြေ. တပ်မက်ပါသလား..ဖတ်ရန် (ယနေ့ နေ့စဉ်ခွန်အား) ယောဘ ၂၀
Posted by Witmone at 5:01 PM No comments:
၊ .. ခရစ်ယန်ကျမ်းပြု ဆရာများရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများ၊ လေ့လာသူများအတွက်တော့ ဗဟုသုတ ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူ များအတွက်တော့ ပိုမိုနှစ်သိမ် ခွန်အား ရ ပါ မယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ..အချိန်ပေးပြီး ၅၄ မိနစ် မြန်မာစကားနဲ့နားဆင်ပါ။ တကယ်တော့ ကိုးကွယ်ဝါဒ ဆိုတာ မမြင်နိုင်တဲ့ ဝိညာဉ်ရေးဖြစ်တယ်။ ဒုက္ခဆင်းရဲချိန်တိုင်း မိမိ ယုံကြည်ရာ အားကိုးစရာဖြစ်ပါတယ်။.. လေးစားစွာဖြင့်။
Posted by Witmone at 11:12 PM No comments:
Labels: ဗဟုသုတ, ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual.Sermons
ကိုရိုနာကုသဆေး အမေရိကန် (USA Gilead)
သမ္မတ ထရန့်က Remdesivir ဆေးကို FDA Approve ဖြစ်စေပြီး ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။
ဆီရမ် အင်စတီကျု (အိန္နယ) မှ ကိုဗစ်ကာကွယ် ဆေး အား အ​မြောက် အမြား ထုတ်လုပ်တော့မည် ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ တွင် သန်း ၄၀-၅၀ အထိ ထွက်ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ChAdOx1 nCoV-19 ဆေးကို အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်ကြီးရှိ ဂျင်နာ အင်စတီကျုမှ ဖေါ်စပ်ထားပါတယ်။ အရေးပေါ် လိုအပ်ချက်အရ လူများအပေါ် စမ်းသပ် ရလဒ် မစောင့်တော့ပဲ ငွေ $80 သန်း စွန့်စား ထုတ်လုပ် ခြင်း ဖြစ်တယ်။ မျောက် များနဲ့ စမ်းသပ်တာ အောင်မြင်ပါတယ်။
အာဖရိကတိုက် မှာ လူအသေပျောက်များလှတဲ့ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် အတွက် ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်တယ်။ ဂျပန် ကုမဏီ Fujifilm Group က သုတေသနပြုလုပ်ပြီး လူနာများနဲ့စမ်းသပ်အောင်မြင်လို့ ဂျပန် FDA နဲ့ နိုင်ငံတကာက ၂၀၁၄ မှာ လက်ခံသုံးစွဲ နေတဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိနေတဲ့ ဆေးများကို လူနာ ဘေးမ​ဖြစ်အောင် သုံးစွဲရင်း Avigan ဆေးကို ဂျပန်နိုင်ငံ ဆေးရုံများက သုံးစွဲတာ အတိုင်းတာ တစ်ခုထိ အောင်မြင်ပါတယ်။ တောင်ကိုးရီးယား နဲ့ အခြား နိုင်ငံ များက သုံးဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မအောင်မြင်သေးပါ။ ဂျပန် ဖူဂျီအုပ်စု .ကတော့ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံများကို အခမဲ့နဲ့ အသက်သာဆုံး ကူညီမယ် ကြေငြာပါတယ်။ ..
BCG (တီဗွီ) ကာကွယ်​ဆေး
အိန္နိယ ပညာရှင်များက BCG ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့ မဖွံဖြိုးနိုင်ငံများမှာ ရောဂါ နည်းပါးပြီး၊ ချမ်းသာ အဲကွန်းနဲ့နေထိုင်တဲ့ အမေရိကန်၊ ဉရောပနိုင်ငံများ မှာ အကြီးအကျယ် ကူးစက်နေတာကို ဆန်းစစ် ရင်း BCG ကာကွယ်ဆေး ကို သုတေသန ပြုပါတယ်။ ကလေးများမွေးစက BCG ထိုးတဲ့နိုင်ငံများမှာ အဆုတ်ယောင် (တီဗွီရောဂါ TB ကျူဘာကလိုးစစ်) ကာကွယ်ဆေး ကို 1921 က စတင် ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း တိုးတက်တဲ့ ဉရောပ နိုင်ငံများက 1945 နောက်ပိုင်း သူတို့နိုင်ငံမှာ BCG ဆေးထိုးဖို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုပြီး ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ယခု ကိုရိုနာ အဆုတ်ယောင် ရောဂါသယ်များ BCG မထိုးထားသူများတယ် ဆိုလာ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်လက် BCG သုတေသန လုပ်ဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ နယ်သာလန်မှာ 1000, အော်စတြေလျားမှာ 4170, အီဂျစ်မှာ 900, အမေရိကန် ဘော်စတွန်/ဟူစတန် မှာ 700 စသဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကုမဏီကြီးများ နဲ့ အမေရိကန် FDA စမ်းသတ်ခွင့်ပြု စာရင်းများကို အင်တာနက်မှာ ပွင့်လင်းစွာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ AMGN, BioNet & Pfizer, CialciMedica, CytoDyn, Gilead, GSK, Inovia, Johnson & Johnson စသဖြင့် အမြောက်အများ အမေရိကန် အစိုးရ စမ်းသပ်ခွင်ပြုတဲ့ ဝက်ဆိုက် www.clinicaltrials.gov မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Wikipedia : Google တွေမှာ Corona Vaccine နှိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများ ရှာနိုင်ပါတယ်။
Gilead Science ကုမဏီရဲ့ Remdesivir
လက်ရှိ ကိုရိုနာ ကုသရေး မှာ ရှေ့ဆုံးရောက်နေတဲ့ ကုမဏီနဲ့ သူတို့ထုတ်တဲ့ Remdesivir ဆေးအကြောင်း လူတွေစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဧရာမ အမေရိကန် ဆေးဝါး ကုမဏီကြီးဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု US$ 61 billion, Revenue US$22 billion (2019) ဖြစ်တယ်။ ဝန်ထမ်းပေါင်း 11800 ဉီး ရှိပါတယ်။ ငွေအား သာမက နည်းပညာ မူပိုင်ခွင့် များစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ပေါ်တာနဲ့ တရုပ်ပြည်က Wuhan Institute of Virology ဗိုင်းရပ်စ် သုတေသနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆေးဝါး တီထွင်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့် ပြုလုပ်ပြီး. ရောဂါ အသဲအသန်လူနာများကို ဝူဟန်မှာ သူတို့ ဖောိထုတ်တဲ့ Remdesivir ဆေးကို စမ်းသပ်ခွင့် ရရှိပါတယ်။ တရုပ်အစိုးရ ခွင့်ပြုအောင် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သုတေသန အဖွဲ့ကပဲ လျှောက်လွှာတင်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ မူပိုင်ခွင် နှစ်၂၀ ရယူထားပြီး Ophan Drug အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားတာပါ။ Ophan Drug ဆိုတာ လူနာရှားပါးတဲ့ ရောဂါမျိုး အတွက် တီထွင်တဲ့ ကုမဏီတွေကို အခွန်လျှော့ခြင်း အပါဝင်၊ နှစ်ရှည်မူပိုင်ခွင့်၊ လူနဲ့စမ်းသပ်ရာမှာ Phase3အဆင့်ဆို လူ1000 မလိုတော့ပါဘူး။ FDA Approve ဖြစ်ဖို့ အစိုးရက အများကြီး ဖြေရှော့ပေးတါပါ။ ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြလို့ အစိုးရက Ophan Drug ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက.ဂျပန် Aviganကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်မယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
အမေရိကန် သူဌေးနိုင်ငံမှာ Remdesivir (ကိုဗစ်ကုသဆေး) ကို ဆေးရုံများ. လူနာများက အလွန်လိုလား နေတာကို တရားဝင် ခွင့်ပြု လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ် ကာကွယ်. ကုသ ဆေးအချို့
Posted by Witmone at 1:45 AM No comments:
ဥပုသ်နေ့ဒေသနာ။ ၁၂-၄-၂၀၂၀ အီစတာတနင်္ဂနွေ။ (Copy from Sayar Hsoe)
ဥပုသ်နေ့ဒေသနာ။ ၁၂-၄-၂၀၂၀ အီစတာတနင်္ဂနွေ။
(Copy from Sayar Hsoe)
ကောင်းကင်တမန်ကလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သောယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြသည်ကိုငါသိ၏။ ဤအရပ်၌မရှိ။ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီ။ (မ၊၂၈:၅)
တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာသီချင်းအဆိုကောင်းလှသော မစိန်မေ အမည်ရှိသူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်မိပါသည်။ သူမသည် ငယ်စဉ်ကတည်းကဘုရားကျောင်းမှာအစဉ်အမြဲ သီချင်းဆို၍အသံကို ဆက်ကပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကာလများသည် မိမိဝါသ နာပါရာကိုဘုရားကျောင်းတွင်လေ့ကျင့်တည်ဆောက်ခွင့်ရ၍၊ သို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်ခွင့်ရသဖြင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့လာမြဲရှိသောကြောင့်..
" စိန်..နင်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကျောင်းကိုအမြဲလာတက်ရတာလဲ။ သီချင်းဆိုရတာ ဝါသနာပါလို့လား။"
ဟုမေးဖူးရာသူမကဟက်ခနဲရယ်ပါသည်။ ပြီးမှ..မဟုတ်ဘူးဟ။ ငါသီချင်း ဆိုချင်လို့ဘုရားကျောင်းကိုလာတာမဟုတ်ဘူး။ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းချင်လို့၊ ဟုဖြေပါသည်။ နင်စဉ်းစားကြည့်လေ။ သေခြင်းမှထမြောက်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုမှ ငါမချီးမွမ်းရင်၊ဘယ်သူ့ဂုဏ်တော်ကိုငါချီးမွမ်းမလဲ။ တကယ်တော့ငါဘုရားကျောင်းကိုလာတက်တာက၊သူကိုယ်တိုင်သေခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီး၊ထမြောက်တော်မူတဲ့အတွက်ငါ့ကိုလည်းသေခြင်းကထမြောက်စေမယ်လို့ကိုးစားယုံကြည်လို့..ဟုဆက်၍ပြောခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း လေးဆယ်တုံးကသူမပြောခဲ့တာပါ။ သို့သော်သူမ၏စကားကိုမမေ့နိုင်ပဲအမြဲပင်သတိရနေခဲ့ပါသည်။ တကယ်တော့၊ ခရစ်ယာန်ဟူသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်တည်လာခြင်းပါ။ ခရစ်တော်ကို ဘာကြောင့်ယုံကြည်ပါသလဲ။ ထိုမေးခွန်း၏အဖြေကတော့ အီစတာနံနက်ခင်းမှာရှိပါသည်။
ထိုနေ့နံနက်မိုးလင်းအံ့ဆဲဆဲအချိန်၌၊ မာဂဒလမာရိနှင့်အခြားသော မာရိတို့သည်၊ သင်္ချိုင်းတော်သို့အကြည့်အရှုသွားကြ၏။ လွန်ခဲ့သောသုံး ရက်ကအသေသတ်ခံရ၍၊ ကွယ်လွန်ခဲ့ရသော နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏ သင်္ချိုင်းတော်သို့ရောက်လျှင်၊မြေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်၍၊ ကောင်းကင်တ မန်တပါးသည်သင်္ချိုင်းဝမှကျောက်ကိုလှိမ့်လှန်ပြီးလျှင်၊ထိုကျောက်ပေါ်မှာထိုင်နေ၏။ သူ၏မျက်နှာသည်လျပ်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏။ အဝတ်သည်လည်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူ၏။ စောင့်သောသူတို့သည် ကောင်းကင်တမန်ကိုမြင်လျှင်၊ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်၍၊သေမတတ်ဖြစ်ပါ၏။ ကောင်းကင်တမန်က၊မာရိတို့အား သင်တို့ရှာသောသူသည်ဤနေရာ၌မရှိ။ သူမိန့်တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း ထမြောက်တော်မူ၍ထွက်သွားပြီ။ သူလျောင်းခဲ့သောနေရာကိုကြည့်ပါ။ပြီးလျှင် တပည့်တော်တို့ပြောကြပါ ဟုတိုက်တွန်းသောအခါ မာရိတို့သည်လည်းအံ့သြဝမ်းသာခဲ့သောအကြောင်းကိုကျမ်းစာ၌..
ဖော်ပြပါသည်။ ထမြောက်တော်မူသောသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၊အိစတာနံ နက်ခင်းတွင်မာရိတို့အားစကားပြောဆိုမှာကြားရုံမက၊ထို့နေ့မှာပင် ဂါလိလဲအိုင်သို့ကြွ၍ တပည့်တော်တို့အားလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ထူးခြားသောသူအများပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ကမ္ဘာ မြေပြင်တခုလုံးရေဖုံးလွှမ်းသော်လည်းမသေနိုင်သော နောဧ။ အံ့ ဖွယ်ဗာဗုလုံအင်ပါယာကိုတည်ဆောက်သော နေဗုခနေဇာမင်းကြီး။ တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်သောဂျူးလိယက်ဆီဇာ။ အင်ပါယာတို့၏သခင်အလက်ဇန်းဒါး .. စသည်ဖြင့်ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်အများပေါ်ထွန်းခဲ့သော်လည်း၊သူတို့၏အောင်မြင်မှုသည်ကမ္ဘာချီသော်လည်း မအောင်မြင်နိုင် မလွန်ဆန်နိုင်သောအရာကတော့သေခြင်းပါပဲ။ လူသားစင်စစ်ဖြစ်တာမို့ အချိန်တန်လျှင်ကြွေလွင့်သွားကြရပါသည်။ သေလွန်ပြီးနောက်မှာတဖန်ပြန်၍ မထနိုင်ကြတော့ပါ။ သခင်ယေရှုနှင့်ထိုမဟာလူသားများအကြားခြားနားမှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သေခြင်းကိုအောင်နိုင်လျက် ထာဝရအသက်ရှင်သူဖြစ်သောကြောင့်သာ၊ထိုသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရန်ထိုက်တန်ခြင်းပါ။ ထာဝရဘုရားသခင်..ဟူသောနာမ၌ အစဉ်အမြဲတည်သောသဘောပါဝင်၍ ယနေ့ကာလသာမက၊ နောင်ကာလအထိစိတ်ချစရာ၊ဖက်ရမ်းစရာ၊ကိုးကွယ်စရာဖြစ်စေပါသည်။ သခင်ယေရှုသည်သာမန်လူသားတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံး၌သခင်ယေရှုသည်မတရားသောစီရင်ချက်များကိုလက်ခံ၍ ကရာနီကုန်းပေါ်သို့တက်သွားခဲ့ပါသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်အသေသတ်ခြင်းကိုခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ သြင်္ဂိုဟ်ခြင်းကိုခံရ၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါ၏။ ကိုယ်တော်သည်ရက်ပေါင်းလေးဆယ် တပည့်တော်တို့နှင့်အတူနေထိုင်စားသောက် အတူသွားလာပြီးမှ၊အ သက်ရှင်လျက်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွသွားခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောထိုသခင်သည်၊ကွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအသက်ရှင်လျက်ရှိနေပါ၏။ တခါကဥပုသ်နေ့မှာဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သွားဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေသော အစ်မကိုမောင်လေးဖြစ်သူကမေးပါ၏။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာဘုရားသခင်ရှိသလားအစ်မ။ ထိုအခါသူ့အစ်မကရှိတာပေါ့ဟုဖြေပါသတဲ့။ သူမ၏ မောင်က ..
" သားတော့တခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူး။ အမကောတွေ့ဖူးလို့လား"
စင်စစ် ကိုယ်တော်သည်အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းမျက်စေ့နှင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။သူ၏ထမြောက်ခြင်းကိုလက်ခံလျက် ဝမ်းမြောက်စွာချီးမွမ်းကြရမှပါ။ဤဘုရားသည် နားရှိလျက်မကြား၊မျက်စိကြည့်လျက်မမြင်သောဘုရားမဟုတ်ပါ။နိစ္စထာဝရအသက်ရှင်လျက် သူဖန်ဆင်းသောကမ္ဘာ၊သူဖန်ဆင်းသောလူများကိုကြီးစွာသောချစ်ခြင်းနှင့်အသက်ကိုပင်ပေးလျက်၊အပြစ်ကြွေးကိုဆပ်ပေး၍ကယ်တင်သောသူပါ။သူ့အားလူသေထားရာသင်္ချိုင်း၌သိပ်ထားသော်လည်း၊သေခြင်းကိုအောင်မြင်၍ အီစတာနံနက်ခင်းမှာထမြောက်ရှင်ပြန်ကာဘုန်းတော်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါ သည်။အသက်ရှင်သောဘုရား၊အသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားအားကိုးကွယ်ရသဖြင့် အသက်ကိုရဖို့ရန်အာမခံရှိကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါရစေ။
(ဓမ္မသီချင်း ၁၃၆။ ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီကျူး Christ Arose)
Posted by Witmone at 5:26 AM No comments:
Labels: ဝိညာဥ္ေရးရာ Spiritual.Sermons
ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ. - ရှိုင်းကိုကိုလင်း(SLT)
- ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ သတင်းကောင်းရဲ့ နိဂုံးချုပ်
....Shine Ko Ko Lyn....
- လွဲမှားတဲ့ အယူဝါဒ၊ သွန်သင်ချက် ဆိုတာက
ဘာသာတိုင်းမှာ ကြုံရတတ်တဲ့ အကြီးမားဆုံး ‌
ပြဿနာ တစ်ခုပါ။ ယ‌နေ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်‌နေပြီဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်ရဲ့ သမိုင်းကို လေ့လာကြည့်ရင် ရာစုနှစ်တိုင်းမှာ ရှေးရိုးခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်းမှ သွေဖယ်ပြီး
လွဲမှားတဲ့ အယူဝါဒ၊ သွန်သင်ချက် မြောက်များ
စွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှာ သက်သေ
- ဒီလို ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာ
သခင်ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်နဲ့ တမန်တော်ကြီးများမှာ အကြိမ်ကြိမ် သတိပေး ပြောဆိုခဲ့ကြပါ
တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ယနေ့အချိန်ထိလည်း
ဒီ ထောင်ချောက်မှာ မိနေကြတဲ့ ခရစ်ယာန်များ
စွာ ရှိနေတာတော့ စိတ်မကောင်း စရာပါ။ တစ်ချို့ခရစ်ယာန်တွေကလည်း ဒီထောင်ချောက်မှာ
မိလို့မိနေမှန်း မသိကြတဲ့ သူတွေလည်း များစွာ ရှိပါတယ်။ဒီလွဲမှားတဲ့ သွန်သင်၊ဟောပြောချက်
တွေထဲမှာ မြောက်များစွာသော ခရစ်ယာန်များကို လွယ်ကူစွာ လမ်းလွဲစေပြီး လူကြိုက်များတဲ့
တရားကတော့ ကျန်းမာရမယ်၊ ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ တရား(သို့) သတင်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
- ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်းကောင်း ဆိုတာက
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ရင်၊ ကိုးကွယ်ရင် (သို့)
ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင် လောကမှာ အောင်မြင်‌နေ
ရမယ်၊ လောကဥစ္စာစည်းစိမ်အားဖြင့် ကြီးပွား ချမ်းသာရမယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာခြင်း ရှိရမယ်( သွေးတိုးတောင် မရှိရဘူးတဲ့ဗျာ)
စတဲ့ တရားတွေကို သတင်းကောင်း လုပ်ပြီး
ဟောပြောနေကြတဲ့ ဒေသနာပါ။ ကျန်းမာ၊ ချမ်း သာခြင်းကို လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဒီအရာတွေကို အားလုံးနှစ်သက်ကြတာက သဘာဝပါ။ စာရေးသူ အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း လူကြိုက်များပြီး အောင်မြင်နေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာပြဿနာရှိလဲ။ ဘာတွေ လွဲမှားနေတာလဲ လေ့လာကြရအောင်။
- ပထမဦးဆုံးသော ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်း ကောင်း (Prosperity Gospel ) စတင်ပြီး ဟော ပြောခဲ့သူကတော့ စာတန်မာရ်နတ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် ချမ်း
သာ ကြွယ်ဝမယ်၊ အောင်မြင်မယ်၊ ဒီလောကရဲ့
ခက်ခဲမှုတွေကနေ သင်လွတ်မြောက်ရမယ် ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့သူက သခင်ခရစ်တော်တော့
မဟုတ်ပါဘူး။ စာတန်မာရ်နတ် ကိုယ်တိုင်သာ
ဖြစ်ပါတယ်။( ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၄:၁ - ၁၁)
- စာတန်မာရ်နတ် မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ ပထမဦး‌
တစ်ပည့်ကတော့ Oral Roberts(1918-2009)
ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်းကောင်း ရဲ့ ဖခင်ကြီး( The Father of Properity Gospel) လို့ လူသိများသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူရဲ့ အဓိကလွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံးသော တပည့်တွေကတော့
Kenneth Having ( 1917- 2003) Kenneth Copeland ( 1936 - ) Fred Price( 1932-) တို့
ဖြစ်ပြီး လက်ရှိနှစ်ဦးကဝောာ့ အသက်ရှင်သန်
လျက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအနောက်နိုင်ငံများမှာ
ဒီကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်းကောင်းက ရောဂါ
ပိုးလို လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့ကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။
- လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက်အရမ်းများ‌နေပြီး အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာခြင်း သတင်းကောင်းကို တစိုက်မတ်မတ်ဟောပြော
နေကြတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကတော့ Joel Osteen၊ Joyce Meyer၊ Benny Hinn တို့ဖြစ်ပြီး
အခြား မြောက်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့
ဒီ သတင်းကောင်းက အာဖရိကနဲ့ အာရှတိုက်တို့ကို အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ပျံ့နှံ့လာပြီး အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်မှာ အောင်မြင်များစွာရ‌ရှိနေတဲ့ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်းကောင်း ကို ဝေငှနေကြတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ပြောရရင် ဒေးဗစ်လာ (David Lah)၊ ဇော်လင်းအောင်(Zaw Lin Aung)၊ စာရာအေး( Sarah Aye) နဲ့ ယောရူအေး( Joshua Aye) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့
ရောရော နှောနှော ဟောတတ်ကြတဲ့ သူတွေကို
တော့ နောက်မှ ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။ ဒီ
နေရာမှာ စာဖတ်တဲ့သူတွေကို နားလည်စေချင်
တာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပဲ သူတို့ဟောတဲ့တရား၊ သတင်းကောင်း
ကိုသာ ဝေဖန်၊ ထောက်ပြ၊ သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်
ကြောင်းကို ခွဲခြားနားလည် စေလိုပါတယ်။
- Regent တက္ကသိုလ်မှ ဓမ္မသစ် ပညာရှင်တစ်ဦး
ဖြစ်တဲ့ Dr. Gordon D. Fee က
🗣️" ခရစ်ယာန်မှန်ရင် ကျန်းမာရမယ်၊ ချမ်းသာရမယ်ဆိုပြီး လွဲမှားတဲ့ မျော်လင့်ခြင်း (Hope)
‌ပေးနေခြင်းကိုက ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးဖြစ်ပြီး၊
ပိုပြီး ဆိုးရွားတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဒီအရာကိုသတင်းကောင်းလို့ ဝေငှဟောပြော နေခြင်းဖြစ်
ကြောင်း" ပြောဆိုရေးသား ခဲ့ဖူးပါတယ်။
- လက်ရှိ မြန်မာပြည်ရဲ့ ခရစ်ယာန် လောကမှာ
ကြုံနေရတဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာက အားလုံး
သိတဲ့ ဆရာဒေးဗစ်လာ မဟုတ်သလို၊ ဆရာ ဇော်လင်းအောင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာ
က သူတို့ဟောနေတဲ့ ကျန်းမာရမယ်၊ ချမ်းသာရမယ် ဆိုတဲ့ ဒေသနာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီတရားက
ပြဿနာရှိလည်း၊ အန္တရာယ်များလည်း၊ လွဲမှား
လည်းဆိုတာတွေကို အချက်သုံးချက်ဖြင့် ဖော် ပြလိုပါတယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ ဒီလွဲမှားနေတဲ့ သတင်းကောင်း နိဂုန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကို
သဘောပေါက် နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်
(၁) စစ်မှန်တဲ့ သမ္မာတရားမဟုတ်ခြင်း
- ဒီနေရာမှာ စဉ်စားစရာဖြစ်လာတာက သူတို့အားလုံးလည်း ကျမ်းစာအသုံးပြုပြီး ဟောနေကြတာပဲ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့သမ္မာတရား
မဖြစ်တာလည်း။ အဖြေကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ ကျမ်းစာသုံးတိုင်း မှန်တယ်လိုပြောလို့ မရပါဘူး။ ဥပမာ။ ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးထက်စာရင် စာတန်မာရ်နတ်က ကျမ်းစာပိုသိပါတယ်။
စာတန်မာရ်နတ်က ရက်ပေါင်းလေးဆယ် ယေရူခရစ်တော်ကို စုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါ အသုံး ပြုခဲ့တဲ့ စကားတွေအားလုံးက ကျမ်းစာမှာ ရေး သားတဲ့ အရာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းတွေကိုလွဲမှားစွာ အဓိပ္ပါယ်ခံယူခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းကို ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် ချေပခဲ့တာ
တွေ့ရှိရပါတယ်။( ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၁ - ၁၁)
- ကျွန်တော်သာ တစ်ကယ်လို့ စာတန်မာရ်နတ်
ဖြစ်တယ်ဆိုရင်( ဥပမာပြောတာနော်) ကျမ်းစာကို အသုံးပြုပြီးတော့ လွဲမှားစေဖို့နည်းလမ်းရှာမှာကျိန်းသေတယ်။ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော့ ခရစ် ယာန်ရဲ့ ယုံကြည်မှုက ကျမ်းစာကို အခြေခံလို့ပါ
ဒီအခြေခံကို လွဲမှားအောင် လုပ်လိုက်ခြင်းက ခရစ်ယာန် တွေကို အထိရောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်‌လို့ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနည်းလမ်းအလုပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စာတန်မာရ်နတ်က သိ‌နေလို့ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုခရစ်ယာန်တိုင်း သိနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
- စစ်မှန်တဲ့ သမ္မာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရခြင်းက အတုဖြစ်နေလို့ပါ။ C.S Lewis ပြောသ လို " မှန်ကန်တဲ့ အတွေးခေါ်သမား ပိုမှန်ကန်ဖို့
မှားနေတဲ့ အတွေးခေါ်သမား ရှိဖို့လိုတယ် " လို့
ပြောသလို " စစ်မှန်တဲ့ သမ္မာတရားကို ပိုသိဖို့
သမ္မာတရား အတုတွေရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။"
အရေးကြီးတာက အတုအစစ်ကို ကောင်းမွန်စွာ
ခွဲခြားတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဂျင်းမမိဖို့ လိုပါ
- ကျမ်းစာကို သိပါတယ်ဆိုတာနဲ့တော့ မလုံ လောက်‌သေးပါဘူး။ ကျမ်းစာရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို စနစ်တစ်ကျ လေ့ လာသင်ယူဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီစနစ်တကျ လေ့လာနည်းကိုတော့ ဂရိစကားလုံး (ἑρμηνεύω) မှလာပြီး Hermeneutics လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ #အနက်ဖွင့်ဆိုခြင်း လို့ အဓိပ္ပယ်ရပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ နောက် တစ်ခုက ဂရိစကာလုံးကလာတဲ့ (ἐξήγησις)
Exegesis ပေါ့။မြန်မာလိုတော့ #ရှင်းလင်းချက်
လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ကျမ်းပိုဒ်တွေကို သူတို့နဲ့ နဂိုမှုရင်း အခြေအနေ (original and literary context)၊ စာပေအမျိုးအစားပုံစံနှင့် သမိုင်းတွေကို အခြေခံပြီးတော့ သူတို့ဘာကို ဆိုလိုပြီး ဘာပြောနေတာလဲဆိုတာကို သိနိုင်အောင် ကြိုး စားလေ့လာတဲ့ ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိ က အားဖြင့် ဘယ်သူက ရေးခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူ့ဆီကိုရေးတယ်၊ ဘာလို့ရေးတယ်၊ ဘယ်လိုရေးခဲ့တယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာရေးခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်ရေးလဲ ဆိုတာတွေကို ရှာဖွေလေ့လာရပါတယ်။ ကျမ်းပိုဒ်ပါ စကားလုံးတွေ၊ စာကြောင်းတွေနဲ့ အကြောင်းအရာ အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားပုံတွေကို ရှာဖွေစူးစမ်းလေ့လာခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို တရားဟောသူတိုင်း စနစ်တကျလေ့ဖို့
- ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်းကောင်း ဟောတဲ့
ဆရာ၊ ဆရာရေးတဲ့ စာအုပ်အားလုံး မဟုတ်ရင်
တောင် မဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ရှားပါတယ်။ အရောင်းရ ဆုံးစာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့
ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ခြင်းတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့
ကောင်းပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရင် စိတ်ဓတ်ခွန် အား ဖြစ်စေသလို ခံစားရပြီး ဆွဲဆောင်အားအရမ်းကောင်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်တစ်ကျလေ့လာ ဖတ်ကြည့်ရင်တော့ လွဲမှားနေတဲ့ ကျမ်းအနက်ပြန်မှုတွေ နဲ့ လွဲနေတဲ့ ယုံကြည်မှု တွေ မြောက်များစွာ တွေ့ရမှာပါ။ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို စနစ်တစ်ကျ အနက်ဖွင့်ပြတာမျိုး မတွေ့ရပါဘူး။ အနက်ဖွင့်ပြီးတော့ ဟောလည်း မဟောပြောပါဘူး။ မတက်ကြတာလား မလုပ်ချင်ကြတာလား သူတို့ အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ သူတို့အားလုံးတော့
မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့်အများစုက Theological education ဘက်မှာ အရမ်းနိမ့် နေတာကတော့ အမှန်တရားပါ။ သူတို့ အားလုံး ယေဘုယျအား ဖြင့် လက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့ ကျမ်းချက်ကို လေ့ လာကြည်ရအောင်
✝️ အချင်းချစ်သူ၊ သင်၏စိတ်နှလုံးသည်
ကောင်းစားခြင်း နှင့် ကျန်းမာခြင်း ရှိ မည်
အကြောင်းငါဆုတောင်း၏။ (3John 1:2)
- ဒီကျမ်းချက်ကိုအခြေပြုပြီးကြည့် ကျမ်းစာက
ကောင်းစားဖို့၊ ကျန်းမာဖို့ပြောတယ်လို လက်ခံယုံကြည် ကြပါတယ်။ Kenneth Copeland ရေး သားတဲ့ The Laws of Prosperity မှာ အကြိမ်
များစွာ ရေးထားသလို့ ဒီနေ့ နာမည်ကြီး Joel Osteen ကလည်း အကြိမ်ကြိမ် ဒီကျမ်းကို အ
ခြေခံ ဟောပြောကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ကျမ်းပြောတဲ့ စကားကို ဘောင်ကျော်ပြီး ပြော ဆိုရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -
ဒီကျမ်းချက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ဂရိစကားလုံး ဖြစ်တဲ့ ευημερώ(Prosper) ဆိုလိုရင်းက ကောင်း စားရမယ်လို့ ဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲ ကောင်းစားစေ
ဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်
‌စေဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိကြောင်း ဆုတောင်းပေးခြင်းကို
ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျမ်းကို အခြေခံပြီး ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတိုင်း ကောင်းစားရမယ်၊ ကျန်းမာရမယ် ပြောဆို ရေးသားခြင်းက
ဘယ်လောက် လွဲနေတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့် ပါ။ တရား‌ဟောသူရဲ့ အရေးကြီးဆုံး တာဝန်က
‌ကျမ်းစာကို သေချာလေ့လာပြီး ဘုရားသခင်
တွေ၊ အထင်အမြင်တွေ ဟောဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
- နောက်တစ်ခု သူတို့ ဟောနေတဲ့ ခရစ်ယာန်တိုင်း ကျန်းမာရမယ်၊ ချမ်းသာရမယ်၊ အောင် မြင်ရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လို့
လိုချင်တဲ့ ကျမ်းချက်လေးတွေ ကောက်ယူပြီး
ဘုရားသခင်က ဒီမှာကြည့် ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ ဂတိပေးတယ် စသည်ဖြင့် စွဲဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဓမ္မသစ်ကျမ်း(NT) မှာ ၁၂၂ ကြိမ် တွေ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ဖြစ်တဲ့ bless or blessing က မူရင်း ဂရိစကားလုံးဖြစ်တဲ့ εὐλογία (eulogia) ကနေလာပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ် ဆိုလိုရင်းက ပျော်ရွင်မှု၊ လက်ခံမှု (သို့) အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဘုရားရဲ့ လက်ခံမှု (သို့) ဘုရား၌ ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်း လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Context သေချာ
လေ့လာရင် သမ္မာကျမ်းစာမှာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာလို့ ရည်ညွန်းတိုင်းမှာ အမှန်က လောက စည်းစိမ်ကြွယ်ဝ မှုတွေနဲ့ လုံးဝကို သက်ဆိုင်မှု မရှိပါဘူး။ ထပ်ပြောမယ်နော် ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ ကောင်ချီးမင်္ဂလာလို့ပြောတိုင်း လောကဓည်းစိမ်တွေ နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး။ အမှန်က ဆန့်ကျင်ဖက်ပါ။ ခရစ်တော်က သူ့ကိုအမှန်
တစ်ကယ် ယုံကြည်ပြီး နောက်တော်လိုက်ရင်းနဲ့
ခံစားရတဲ့ ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေ၊ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ ဆင်းရဲခြင်းတွေက ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ ဆက်ဆိုင်တဲ့ အရာလို့တောင် သွန်သင်ထားပါတယ်။
( ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၅: ၁၀ - ၁၂)
- ဒါကြောင့်ကျမ်းအနက်ပြန်ခြင်း နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနည်း စသည့် ပညာရပ်တွေကို အခြေခံကျကျ စနစ်တစ်ကျ သင်ယူလေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။
(၂) ကနဦးယုံကြည်မှု နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ခြင်း
- သမိုင်းမသိရင် အတယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း
မအအောင် ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင် ကိုယ်သမိုင်းကို
လေ့လာ သင်ယူဖို့လိုပါတယ်။ ခုတော့ သမိုင်း
မသိတော့ ပေါက်ကရတွေ စင်ပေါ်ကနေအော်
နေကြလည်း အာမင်ပေးတဲ့ အတဲ့ ခရစ်ယာန်
တွေဆို ပေါလို့။ ရှေးကနဦး ခရစ်ယာန်‌ခေတ်မှာ
ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာခြင်း တရားကို တမန်တော်တွေကလည်း မဟောခဲ့ကြသလို့ ဘယ်အသင်းတော် ဖခင်၊ အသင်းတော် လူကြီးကမှ မဟော
ခဲ့ပါဘူး။ ရောမအင်ပါယာရဲ့ လက်အောက်မှာ
အေဒီ (၃၀ မှ ၃၁၃ ထိ ) ခရစ်ယာန်များမှာ ရက် ရက်စက်စက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ‌နှစ်ပေါင်း သုံးရာကျော် အတွင်းမှာ
ခရစ်ယာန် ဖြစ်ခြင်းက ကျန်းမာခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ဖို့ထက် ဘယ်နေ့ အသတ်ခံရမလည်း
ဆိုတာကို စောင့်နေရတဲ့ ခေတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်
ရောမ အင်ပါယာကြီးက ခရစ်ယာန်ဘာသာကို
ကမ္ဘာပေါ်ကနေ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ရှင်းလင်း ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လို့ နောက်ဆုံး ရောမအင်ပိုင်ယာကြီး တခုလုံး ခရစ်ယာန်ဘာသာ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ သမိုင်းတစ်ခုလုံးကို
ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာ ချမ်းသာလို့၊ ကြွယ်ဝလို့၊
ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာသန်စွမ်းကြလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆို ခိုင်မာစွာရပ်
တည်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ယုံကြည်မှုပါ။ ဘယ်အရာမှ
မတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့ တရားကို နားလည်သဘော ပေါက်ကြလို့ တည်မြဲတဲ့ ဘုရားသခင်ကိုသာ ယုံကြည်စွဲလမ်း အသက်ရှင်ခဲ့ကြတာပါ။
- အေဒီ 381 ခုနှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး
Council of Constantinople အစည်းအဝေးမှာ
တက်ရောက်လာတဲ့ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ပေါင်း တစ်ရာ့ငါးဆယ်ဦးတို့က ခြေပြတ်၊ လက် ပြတ်၊ ဒဏ်ရာများနဲ့ ဒုက္ခိတများသာ ဖြစ်‌နေတာ
ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ပြောချင်တာက ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အစောပိုင်း ခရစ်ယာန် သမိုင်းလေ့လာရင် ချမ်းသာခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းတရားကို မဟောပြောခဲ့ကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့ ခရစ်ယာန် မရှိခဲ့တာ မ ဟုတ်ဘူး။ ဆုဝောာင်းခြင်းဖြင့် ကျန်းမာခြင်း မ ခံစားကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ကလုံးဝ ကျန်းမာစေနိုင်တယ်၊ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ခဲ့ကြပေမယ့်လို့ ဒီအရာတွေအ တွက်တော့ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ဒီထက်သာ၍ကောင်းမွန်တဲ့ ထာဝရ အသက်အတွက်သာ ယုံကြည်ခဲ့ကြတာပါ။ပြော ချင်တာက ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြခြင်းက ဘယ်အရာပေါ်မှာမှ အခြေမခံဘဲ ဘုရား သ ခင်၌သာ အခြေခံတဲ့ ယုံကြည်၊ ကိုးကွယ်မှုပါ။
- အဲဒီနောက်ပိုင်း အသင်းတော်က ချမ်းသာပြီး၊
အာဏာတွေ၊ ဂုဏ်တွေများလာတဲ့အခါ အသင်း
အသင်းတော်က တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျက်စီးလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၆ ရာစုမှာ အသင်းတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်ထိဆက်လက် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းတော်သမိုင်း တစ်လျှောက်မှာ ဆင်းရဲခြင်းက အဓိကပြဿနာ လုံးဝမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ချမ်းသာလိုတဲ့ လောဘတွေ၊ အောင်မြင်လိုတဲ့
အတ္တတွေ၊ တည်မြဲလိုတဲ့ အာဏာတွေ တို့ကပဲ ကြီးမားစွာ အသင်းတော်ကို ပျက်စီးစေခဲ့တာပါ။
(၃) မှားယွင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်(Hope) ဖြစ်ခြင်း
- ဘာဖြစ်လို့ မှားယွင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ရတာလဲ။ အဖြေက မှာယွင်းတဲ့ သတင်းကောင်း
( False Gospel) ဖြစ်လို့ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ
ဖော်ပြတဲ့ သတင်းကောင်း( Gospel) တစ်ခုပဲ
ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်းကောင်းက သခင်ယေရှု ခရစ်တော် အကြောင်းပါ။ စစ်မှန်တဲ့ သတင်း ကောင်းဆိုတာက ရိုးရိုးလေးပါ သခင်ယေရှုရဲ့ အသေခံခြင်း နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ကို ဟောပြော သက်သေခံခြင်းပါ။ ဒီသတင်း
ကောင်းအားဖြင့် အပြစ်သား ကျွန်တော်တို့အား လုံး ကယ်တင်ခံရခြင်းကို ကြားသိယုံကြည်စေပြီး ထာဝရ အသက်ကို ရရှိခံစားစေပါတယ်။
(၁ကော ၁၅:၁-၅၊ ရောမ ၅:၈၊ ၁၀:၁၇၊ ဧဖက် ၂:၇-၈)
- ရှင်ပေါလုက( ဂလာတိဩဝါဒစာ ၁:၈) ဧဝံဂေလိတရား တစ်ခုတည်းသာရှိကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။
✝️ သို့သော်လည်း သင်တို့အား ငါဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသော ဧဝံဂေလိတရားကို ငါတို့သည် ဟောပြောသော် ၎င်း၊ ကောင်းကင်ဘုံမှလာသော ကောင်းကင် တမန်ပြောသော်၎င်း၊ ဟောပြောသောသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေ။ လို့သတိပေးထားပါတယ်။
- သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင် ဘုရားသခင်အနေဖြင့် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာ ချမ်းသာဖို့၊ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ အောင်မြင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်တော်ကို ကိုးကွယ်ရခြင်းမှာ
ဘုရားသခင်ရဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားရပြီး အပယ် ငရဲမီးအိုင်မှ လွတ်မြောက်ကာ ထာဝရအသက် ရဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဘုရားသခင်နဲ့ အတူ ထာဝ ရ ကောင်းကင်ဘုံမှာ စံမြန်းနိုင်ဖို့ရန် မျော်လင့်ခြင်းဖြစ်လို့ လောကအရာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မျော်
- ဒါကြောင့် ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက ကျွန်တော်ရဲ့ မျှော်
လင့်ခြင်းက ထာဝရဘုရားသာဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
✝️ ငါတို့၏ ဝိညာဉ်သည် ထာဝရဘုရားကိုမြော် လင့်လျက်နေ၏။ ထိုဘုရားသည် ငါတို့ကို မစသောသူ ကွယ်ကာသောသူ ဖြစ်တော်မူ၏။ (Psa 33:20)
✝️ သန့်ရှင်းသောနာမတော်ကို ခိုလှုံသောကြောင့် ငါတို့သည်ထာဝရဘုရား၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြ၏။ (Psa 33:21)
✝️ အိုထာဝရဘုရား အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ် တော်ကိုကိုးစားသည်နှင့်အညီ အကျွန်ုပ်တို့အ ပေါ်မှာ ဂရုဏာတော်သက် ရောက်ပါစေသော။ (Psa 33:22)
- ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကြုံတွေ့ရခြင်းက ယုံကြည်ခြင်းအားနည်း
ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ်လို့ ယုံ ကြည်ခြင်းအားနည်းလို့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ကြုံရတယ်ဆိုရင် တမန်တော်တွေ အားလုံးက ယုံ ကြည်ခြင်း အားနည်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လောကမှာ နေထိုင်တဲ့အခါ ဒါတွေအား လုံး မုချကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဘုရားသခင်ကိုအား
အားကိုးတဲ့ သူအတွက် ထိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ပြဿနာပေါင်းစုံကို သည်းခံပြီး ကျော်လွှားဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ရန် ဘုရားသခင်က ခံနိုင်ရည် ခွန်အားပေးပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခက်ခဲချိန်
လည်း အတူပါရှိတဲ့ ဘုရားပါ။
✝️ အသက်ရှင်ခြင်း နှင့်စပ်ဆိုင်သော မြော်လင့်ခြင်း အကြောင်းရှိစေခြင်းငှါ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ညစ်စွန်းခြင်း၊ ညှိုးနွမ်းခြင်း နှင့်ကင်းစင်သော အမွေတော်ကို ငါတို့သည် ခံရစမည်အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ်ကို သေခြင်း မှ ထမြောက် စေတော်မူသော အားဖြင့်၊ ကြီးစွာသော ကရုဏာတော်နှင့်အညီ ငါတို့ကိုတဖန် ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသော၊ ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်၏ ခမည်းတော် ဘုရား သခင်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ (1Peter 1:3) လို့ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ခရစ် ယာန်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းက မတည်မြဲတဲ့
‌စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ မဟုတ်ဘဲ ထာဝရတည်မြဲတဲ့
- ဒါကြောင့် ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ သတင်းကောင်း
ပေးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်(Hope)က လောကနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရာဖြစ်လို့ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်
မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
- လောကီအောင်မြင်မှု၊ ကြွယ်ချမ်းသာစည်းစိမ် တွေက ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင် မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေလည်း ချမ်း သာလို့ရသလို့၊ ခရစ်ယာန်မဟုတ်လည်းလူတိုင်း ချမ်းသာလို့ ရပါတယ်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ချမ်းသာမှုတွေက ခရစ်တော်မပါလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ။ ။ ဆရာလင်းသိုက်ညွှန့်၊ ဖြိုးဖြိုး နဲ့ ဒီးဒီတို့ အများကြီးပါ အောင်မြင်ခြင်း‌တွေ၊ ချမ်းသာနည်းတွေ သင်တန်းပေးသင်ပေးနေကြတာ ပုံလို့ဗျာ ခရစ်တော် မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့မပေးနိုင်တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းက ခရစ်တော်၌သာ ရရှိ ခံစားနိုင်ပါတယ်။
- ဘုရားရဲ့အကြီးမားဆုံး ကောင်းချီးမင်္ဂလာက ဘုရားကိုယ်တိုင် လူသားတွေကို ပေးထားခဲ့တဲ့ သားတော် ခရစ်တော်ကို ရရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဘုရားသခင်နဲ့ သာ၍နီးစေတဲ့ အရာ၊ သာ၍ တိုးပြီး သိစေတဲ့ အရာအား လုံးက ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ ဆက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေပါ။
- ဘုရားသခင်နဲ့ ပိုပြီးနီးစေတဲ့ အရာကကျန်းမာ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို၊ ဖျားနာခြင်းကြောင့် လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချမ်းသာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ဆင်းရဲခြင်း၊ ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မကျန်းမာခြင်း ၊ ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ကောင်းချီး မင်္ဂလာနဲ့ ဆက်ဆိုင်တဲ့ အရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ဆုတောင်းခွန်အားယူ ရှေ့ဆက်စေချင်ပါတယ်။ သခင်ခရစ်တော်ကို ရရှိခြင်းကိုက အကြီးမားဆုံး စစ်မှန်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်း ချီးမင်္ဂလာ ခံစားရတဲ့ သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားနဲ့ အထက်အရာကို စွဲလမ်းပြီး ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ လိုတာပါ။
- ဒီနေ့ ကြုံနေရတဲ့ ကိုဗစ်‌ရောဂါကနေ ယုံကြည်ခြင်း စာမေးပွဲစစ်လာတဲ့အခါ လူကြိုက်များနေတဲ့ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်းကောင်း ကတော့
မြင်မကောင်း၊ ကြားမကောင်း စာမေးပွဲကျ နေတာ အားလုံး အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကပ်ရော ဂါတွေကြားမှာလည်း စစ်မှန်တဲ့ သမ္မာတရားကိုသိဖို့ အခွင့်ပေးတဲ့ ဘုရားသခင် သာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်ကိုအသုံးပြုပြီး
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတွေ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေကို အမိန့်ပေး၊ သိမ်းပိုက်၊ ဝန် ခံဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလိုတော်ကို ရှေးဦးစွာရှာတတ်တဲ့ ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျမ်းစာက ‌ယောဘလို ချမ်း သာတဲ့အခါ၊ဆင်းရဲတဲ့အခါ၊အောင်မြင်တဲ့ အခါ ၊ ကျရှုံးတဲ့ခါ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း မပြောင်းလည်းသလို ကျွန်တော်တို့လည်း အရာအရာမှာ လုံလောက်တဲ့ ကျေးဇူးတော်၊ ဂရုဏာတော်ကို နေ့ရက်စဉ်တိုင်း ခံစားရတယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုဖြင့် ဘုရားသခင်နဲ့အတူ ရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
- ဘုရားသခင်က ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် မကျဆုံး
သလို ဘယ်တော့မှလည်း ကျဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွဲမှားတဲ့ ဩဝါဒတွေ၊ သွန်သင်
သူ၊ ဟောပြောသူကတော့ သမိုင်းမှာ ကျဆုံးခဲ့ကြသလို ဆက်လက် ကျဆုံးနေအုန်းမှာပါ။
မတည်မြဲတဲ့ ကျဆုံးခြင်းဘက်က ရပ်တည်ကြမှာလား။ဘယ်တော့မှ မကျဆုံးတဲ့ ဘုရားသခင်
နဲ့ သူ့နှုတ်တော်ထွက် စကားဘက် ရပ်တည်ကြမှာလား။ ရွေးချင်ရမယ့်သူက သင်နဲ့ ကျွန်တော်ပါ။ စစ်မှန်တဲ့ သတင်ကောင်းသာ ဟောပြောဖို့
လိုနေတာပါ။ ဘုရား သခင်ကို ဘုရားသခင်ဖြစ်သည့် အတိုင်းကို ယုံ ကြည်လက်ခံဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ မြန်မာပြည်က ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ဒီသင် ခန်းစာမှ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သတင်းကောင်း နိဂုံးချုပ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ နားရှိသောသူများ ကြားရပါစေ။
- မြန်မာပြည် ကျန်းမာပါစေ
- The Disease of the Health and Wealth
Gospel by Gorden D. Fee
- Knowing God by J I Packer
- Blessed mean by Vaneetha Rendall Risner
- The NAS New Testament Greek Lexicon
- ဆရာလင်းထွန်း ရေးသားသည့် ကျန်းမာ၊
- The Laws of Prosperity by Kenneth
အခု ကျန်းမာချမ်းသာ အဖွဲ့တွေလည်း ပျောက်သွားမှာမဟုတ်။ ပိုတောင် ကြီးလာနိုင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ ကြိုက်ကြတော့...ကျန်းမာချမ်းသာ တရားနောက်. ဆရာနောက် လိုက်သူတွေ တနေ့မှာ သူဖာသာ. ကျယ်သောလမ်းကနေ ကျဉ်းသော သမ္မာလမ်း ကို လိုက်ကြမှာပါ။ မိမိသာ လမ်းမှန် ဆက်လျှောက်ပါမယ်။ Murann Ezine
Posted by Witmone at 5:23 AM No comments:
ဆရာ David La ကို အချို့ခရစ်ယာန်တွေက ရိုသေလေးစားချစ်ခင်ပြီး
ဆရာ David La ကို အချို့ခရစ်ယာန်တွေက ရိုသေလေးစားချစ်ခင်ပြီး အချို့ခရစ်ယာန်တွေက ဘာလို့မနှစ်မြို့ကြတာလဲ?
​ဒီကိစ္စနဲ့ပါသက်ပြီး Facebook သုံးတဲ့ သူတွေအားလုံး ဒီအစွန်း နှစ်ဘက်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်တယ်။
ဆရာဒေးဗစ်လ ဖန်နဲ့ Anti ဒေးဗစ်လ ပြသနာက ခုမှစတာမဟုတ်ပါဘူး အက်ကြောင်းထပ်တာ မကကွဲပြဲတာ အတော်လေးကို နှစ်ပေါက်နေပါပြီ။
၁။ ဆရာဒေးဗစ်လကို အချို့ ခရစ်ယာန်တွေက ဘာလို့ ရိုသေလေးစားချစ်ခင်ကြတာလဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က ဆရာဒေးဗစ်လ မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီး တရားဟောပွဲတွေ ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ အထင်ကရ ခန်းမတွေ အားကာစးရုံတွေ ဖြစ်တဲ့ MCC ခန်းမ၊ အမျိုးသား ပြဇတ်ရုံ၊ နှင့် နေပြည်တော် နဲ့ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်း ထိ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့သလို မြန်မာပြည်က မြို့ကြီးမြို့ငယ်နဲ့ အသင်းတော် ကြီး၊ သေး ဆရာ David Lah ကို ဖိတ်ကြားမခံရတဲ့နေရာ မရှိသလောက် ဖြစ်သလို ဆရာDavid Lah လဲ မြန်မာပြည်အနှံမရောက်ဖူးတဲ့နေရာလဲ မရှိသလောက်ပါပဲ။
ဒါ့အပြင် UN ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ပြည်ပရောက်သွားတဲ့ ဥရောပ၊ အမေရိက စတဲ့ နိုင်ငံကြီး နိုင်ငံငယ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာခရစ်ယာန် အသင်းတော်တွေမှာ လဲ တတ်အားတရွေ့သွားရောက်ပြီးနူတ်ကပါတ်တော်ကို အားရပါးရဝေငှခဲ့တာ Social Media မှာတွေ့ခဲ့ရလို့ ဆရာ David Lah အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လဲ မြန်မာပြည်ကခရစ်ယာန်လူငယ်များစွာ ကတနေ့မှာ ဆရာ ဒေးဗစ်လလို ဘုရားအသုံးတော်ခံ ဖြစ်ချင်တာ်လို့ ပြောသံတွေကြားရတာ ဆရာ David Lah အတွက် တကယ်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဆရာ David Lah ကိုယ်တိုင်က ဧဝံဂေလိမှာစိတ်အားထက်သန်သလို ဆရာ David Lah အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းတရားနဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကို သိလာတဲ့ လူကြီးလူငယ်တွေ များစွာတွေ့ရတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို အထူးချီးမွမ်းပါတယ်။
သမ္မာတရားအားဖြင့် ဆရာ David Lah ကိုယ်တိုင်မူးယဇ်ဆေးဝါးရဲ့ကျေးကျွန်ကလွတ်မြောက်လာသလို ဆရာ့ David Lah ရဲ့အသက်တာဘယ်လိုပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတာ ဝေငှသက်သေခံခြင်းအားဖြင့် မူးယဇ်ဆေးဝါးရဲ့ကျေးကျွန်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေလဲ အများင်္ကြးပါပဲ။
ဒါတင်မကဘူး ဆရာ့ David Lah ရဲ့ဟောပြောဝေငှခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ မျိုးကြီး၊ နောနော် နဲ့ J Me တို့တွေလဲ ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်လက်ခံရုံသာမက ဆရာ့ David Lah ရဲ့ သာသနာလုပ်ငန်းမှာ တတ်အားသရွေ့ ခုနောက်ဆုံး ချိန်ထိပါဝင်ကူညီတဲ့အထိ လက်တွဲခေါ်တာတွေလဲ တကယ်ကို မွန်မြတ်လှပါတယ်။
ကျွန်တော်သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားပေးတဲ့ ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းမှာလဲ ဆရာ့ David Lah ရဲ့ Online တရားဒေသနာ နားထောင်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းကို သဘောပေါက်လက်ခံရရှိပြီး အမူတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပါဝင်လာကြတဲ့ လူငယ်တွေလဲ အများကြီးပါပဲ။ ဒီ့အတွက် ဆရာ David Lah ကို အသုံးပြုတဲ့ ဘုရားသခင်နဲ့ ဆရာ့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာ တမလွန်အတွက် ငြိမ်သက်စိတ်ချမူရတာ သမ္မာတရားအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့ ဝမ်းမြောက်ခြင်းလောက် ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်မူမျိုး မရှိဘူးဆိုတာ တွေ့ကြုံခံစားဘူးသူတိုင်းသိကြပါတယ်။
ဆရာ David Lah ရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့် အနာရောဂါငြိမ်းသူ တွေလဲ အများကြီးပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဆရာ ဒေးဗစ်လ ကိုအချို့ယုံကြည်သူတွေက ကျေးဇူးတင်ပြီး ရိုသေလေးစားကြတာဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
၂။ ဆရာဒေးဗစ်လကို အချို့ခရစ်တွေကမနှစ်မြို့ကြတာလဲ
ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ၂ ဖွဲ့ရှိပါတယ်။
က။ ပထမအဖွဲ့ကတော့ ဆရာ့ရဲ့ ခရစ်ယာန် ဩဝါဒယံကြည်ခြင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ယုံကြည်သူ မှန်ရင် ကျန်းမာရမယ်၊ ချမ်းသာရမယ်၊ အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ ကတိတော်နဲ့ သွန်သင်ချက် များစွာထဲက တစိတ်တပိုင်းကို အထူးခြေစုံပြစ်ဗဟိုပြုမိတဲ့အတွက်ပါပဲ။
ဒီအဖွဲ့တွေကလဲ သမ္မာတရားနဲ့အညီ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သော်လဲ လောကမှာ နာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ အစုံတွေ့ကြုံရုံမက တမန်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေဆိုရင် ဧဝံဂေလိတရားကြောင့် ရက်ရက်ဆက်ဆက် သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အချက်တွေ
ယုံကြည်သူစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ သာသနာပြုဆရာ William Cary, Adonnian Judsonနဲ့ Hudson Taylor တို့ ခရစ်တော်ရဲ့ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေ ခါးသီးတဲ့ ဘဝတွေ တမန်တော်တွေနည်းတူ ခံစားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအပြင်
“သင်​တို့​သည် ငါ့​ကို​အ​မှီ​ပြု၍ ငြိမ်​သက်​ခြင်း​ရှိ​စေ​ခြင်း​ငှာ ဤ​စ​ကား​ကို​ငါ​ဟော​ပြော​ပြီ။ သင်​တို့​သည် လော​က၌ ဆင်း​ရဲ​ဒု​က္ခ​ကို ခံ​ရ​ကြ​လိမ့်​မည်။ သို့​သော်​လည်း မ​စိုး​ရိမ်​ကြ​နှင့်။ ငါ​သည် လော​က​ကို​အောင်​ပြီ​ဟု မိန့်​တော်​မူ၏။”
‭‭ရှင် ယော ဟန် ခ ရစ် ဝင်။‬ ‭16:33‬ ‭JBMLE‬ စတဲ့ယေရူခရစ် ဟောပြောသွန်သင်ခဲ့တဲ့ ခဲ့တဲ့ ကျမ်းပိုက်တွေများစွာနဲ့ ပြန်လည်ထောက်ပြခဲ့ကြတယ်။
အခုဆရာ Covid 19 positive ဖြစ်တော့ ကျွန်တော်သိသလောက် ဒီအဖွဲ့က ဆရာ David Lah နဲ့ ရောဂါသည်တွေအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ မေတ္တာပြ တဲ့ Post တွေ သူတို့ရဲ့ Page နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Facebook စာမျက်နှာတွေမှာ အသီးသီးရေးသာကြတာတွေ့ရတော့ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကရှင်းပါတယ် သမ္မာတရားကို ဆရာ့အနေနဲ့ ဒီ့ထက် မှန်မှန်ကန်ကန်ဝေငှစေချင်တဲ့သဘောနဲ့ထောက်ပြဝေဖန်တယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်။
ခ။ ဒီအဖွဲကတော့ ဆရာ ဒေးဗစ်လဖန်တွေနဲ့ အဓိကညိတဲ့အဖွဲ့ပါပဲ။
ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့ ဆရာ့ရဲ့ တရားဟောချက်တော်တော်များများမှာ ပါတတ်တဲ့ ဂိုဏ်းဂနတွေ၊ အသင်းတော်တွေ၊ သင်းအုပ်ဆရာတွေ၊ သင်းထောက်တွေ နဲ့သူတို့ရဲ့ မိရိုးဖလာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေ အားနည်းချက် ပြုပြင်သင့်တယ်လို့ ဆရာဒေးဗစ်လ မြင်တဲ့အရာတွေကို ဆရာ David Lah က က ပလ္လင်ပေါ်ကနေ အာပေါင်အာရင်တန်း ပီးအမူအရာ ဟန်ပန်အမျိုးမျိုးနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကြားအောင် Live လွှင့် ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်း အချို့အကြောင်းအရာတွေမှာ တစိတ်ကိုတစ်အိတ်ပြော တဲ့ အသီးအပွင့်တွေပါပဲ။
​ဆရာ့ David Lah ရဲ့ တရားဟောချက်အချို့အပီးမှာ အသင်းတော် နဲ့ယုံကြည်သူအချို့အတွက် တည်ဆောက်စရာမဟုတ်ပဲ စိတ်ဝမ်းကွဲစရာတွေဖြစ်လာတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဆရာဒေးဗစ်လရဲ့ အစွန်းရောက်ဖန်အချိူ့က အသင်းတော်ကထွက်ပြီး ဆရာဒေးဗစ်လတရားကလွဲလို့ကျန်တဲ့ သူတို့အသင်းအုပ်ဆရာနဲ့ အခြား တရားဟောဆရာတွေရဲ့ တရားဒေသနာတွေ နားမထောင်ကြတော့ဘူး။ ဒါလဲ သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မူရှိစေတော့။
ဒါမျိုးက အသင်းတော်တော်ကို ဦးဆောင်တဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ တွေအတွက်လက်ခံဖို့ခက်ခဲတာအမှန်ပဲ။ တဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ အသက်းတော်တပါး စီမံ ဦးဆောင်တာ ရတာဘယ်လောက်ခက်သလဲဆိုတာ အသင်းတော်ကို ဦးဆောင်ဖူးတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာတိုင်းသိကြတာပါပဲ။
ဒီကိစ္စမှာသူတို့အနေနဲ့ ပြုပြင်ပေးတယ်လို့ မခံယူနိုင်တော့ပဲ သူတို့ကို ကမ္ဘာသိ အရှက်ခွဲတာပဲဆိုပြီး ခံယူစရာတွေဖြစ်လာတယ်။ အသင်းတော်ကိုဖြိုခွဲတယ်လို့ ခံယူလာတယ်။
နောက်ဆုံး ကလေးမြို့ရဲ့ အကြီးဆုံးအသင်းတော် တပါးဖြစ်တဲ့ Lei Pi နှစ်ခြင်းအသင်းတော်နဲ့ ဆရာ David Lah နဲ့ ပြသနာဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကသာဓကပါပဲ။
အသင်းတော်တပါးရဲ့အားနည်းချက်ကို နောက်အသင်းတော်တပါး မှာ Live လွှင့်ပြီး ဟောပြောဝေငှတော့ ဆရာ David Lah ကိုချဉ်သွားတဲ့ယုံကြည်သူတွေများလာတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါမျိုးကသင့်တော်သလားဆိုတာလဲ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
အဲဒီရဲ့အကျိုးအဆက် တွေက KBC ၊ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွေမှာ ဆရာ David Lah ကိုလက်မခံဘို့ စာထုတ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာတော့ နစ်နာမူကနှစ်ဦး နှစ်ဘက်အနည်းအများရှိလာတယ်။
နောက်ဆုံးအကျိုးအဆက်က ဒီအဖွဲ့က ဆရာ David Lah ကို တရားဟောဆရာလို့မမြင်တော့ပဲ ပြသနာကောင် လေးကြီးလေကျယ် ဆိုပီးမြင်လာတယ်။
၃။ ကဲအဲမှာ နှစ်ဖွဲ့ကွဲပြီ။ ဆရာ ဒေးဗစ်လဖန်နဲ့ Anti David Lah ဆိုပြီး နှစ်ဖွဲ့ကွဲတော့တာပဲ။
တဖက်ကလဲ သူတို့ကို သမ္မာတရား နဲ့ သွန်သင်ပေးတဲ့ ဟီးရိုး တဘက်ကလဲ ပြသနာကောင်။
သူတို့အညင်းပွားတဲ့ အဓိကအချက်က ဘုရားဘိသိဒ်ပေးတဲ့ ဘုရားလူကို စော်ကားရင် ဒုက္ခရောက်မယ် ဆရာအောင်မြင်တာကိူ မနာလိုဖြစ်ကြတာ ဆိုပြီး ဆရာဒေးဗစ်လဖန်တွေကစွတ်ဆွဲတယ်။
တဘက်ကလဲ ဘယ်ကဘုရားဘိတ်သိဒ်ပေးတဲ့ဆရာလဲ ပြသနာကောင် အလကားလေသမား လို့ သူတို့အတွေ့အကြုံအရပြန်ချေပတယ်။
ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်မှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ နှစ်ဖွဲ့စလုံးကသူတို့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ခံစားချက် ပေါ်က ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သံစဉ်တွေပါပဲ။
သေချာတာကတော့ ဆရာဒေးဗစ်လဖန်တွေ အနေနဲ့ ဆရာဒေးဗစ်လ ကောင်းကြောင်း ဘယ်လိုပဲ ရေးနေပါစေ Anti David Lah အဖွဲ့ကအနည်းနဲ့အများဆက်ပြီးချဉ်နေအုံးမှာဖြစ်သလို တဘက်ကလဲ ဆရာဒေးဗစ်လ မကောင်းကြောင်းဘယ်လိုပဲရေးရေး သူတို့ကို သမ္မာတရားနဲ့သွန်ပေးတဲ့ သူတို့ရဲ့ Hero ဆရာ David Lah ကို ချစ်နေကြအုံးမှာပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့်တဘက်နဲ့တဘက် ရေးနေကြရင်လဲ ရေးတာကလွဲလို့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook ပေါ်မှာ ဆရာ David Lah ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီးခရစ်ယာန်အခြင်းခြင်း ငြင်းခုံရေးသာတာတွေ ရပ်ကြပါတော့လို့ တောင်းဆိုအကြံပြုပါရစေ။
ရေးခြင်သပဆိုရင်လဲ ကိုယ်အဖွဲ့ နဲ့ကိုယ် We Love တို့ We ချဉ်တို့ Group တွေ Page တွေထောင်ပြီး Myanmar Idol Fun တွေလိုဆက်ပြီးရေးကြပေါ့ဗျာ။
ခုဟာခရစ်ယာန်အခြင်းခြင်း အရေမရအဖတ်မရတွေ။ တကယ်ကို ကြားရမြင်ရ ဖတ်ရသူအတွက်ပုံသင်သေမရှိသလို မင်္ဂလာလဲမရှိပါဘူး။
“စိတ်​နှ​လုံး​နှိမ့်​ချ​သော​သူ​တို့​သည် မင်္ဂ​လာ​ရှိ​ကြ၏။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား ကောင်း​ကင်​နိုင်​ငံ​တော်​သည် ထို​သူ​တို့၏ နိုင်​ငံ​ဖြစ်၏။-
သ​နား​စုံ​မက်​တတ်​သော​သူ​တို့​သည် မင်္ဂ​လာ​ရှိ​ကြ၏။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ ထို​သူ​တို့​သည် သ​နား​စုံ​မက်​ခြင်း​ကို ခံ​ရ​ကြ​လ​တ္တံ့။-
စိတ်​နှ​လုံး​ဖြူ​စင်​သော​သူ​တို့​သည် မင်္ဂ​လာ​ရှိ​ကြ၏။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ ထို​သူ​တို့​သည် ဘု​ရား​သ​ခင်​ကို မြင်​ရ​ကြ​လ​တ္တံ့။-
သူ​တစ်​ပါး​ချင်း ခိုက်​ရန်​ပြု​ခြင်း​ကို ငြိမ်း​စေ​တတ်​သော​သူ​တို့​သည် မင်္ဂ​လာ​ရှိ​ကြ၏။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား ထို​သူ​တို့​သည် ဘု​ရား​သ​ခင်၏​သား​တော်​ဟု ခေါ်​ဝေါ်​ခြင်း​ကို ခံ​ရ​ကြ​လ​တ္တံ့။-
‭‭ရှင် မဿဲ ခ ရစ် ဝင်။‬ ‭5:3-10‬ ‭JBMLE‬‬
“မိ​မိ​ညီ​အစ်​ကို​ကို မုန်း​လျက်​ပင်၊ ငါ​သည် အ​လင်း၌​ရှိ၏​ဟု ဆို​သော​သူ​သည် ယ​ခု​တိုင်​အောင် မှောင်​မိုက်၌ ရှိ​သေး၏။- မိ​မိ​ညီ​အစ်​ကို​ကို ချစ်​သော​သူ​သည် အ​လင်း၌ တည်​နေ၏။ ထိ​မိ၍ လဲ​စ​ရာ​အ​ကြောင်း​သည် ထို​သူ၌​မ​ရှိ။-”
‭‭ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ ပ ထ မ စောင်။‬ ‭2:9-10‬ ‭JBMLE‬‬
ကချင်ပြည်နယ် ကနေ မက်ဆေ့ ပို့ပေးတဲ့ Lahpai Nangpri (FB Live) ..17 မိနစ်လောက် (ကချင်စကား) နားထောင်ကြည့်တာ အများကြီး ခွန်အားရပါတယ်။ ဆရာဒေးဗစ်လား တရားပွဲတွေ.. မှားယွင်းမှုတွေရှိကြောင်း သိရတာ ကြာပါပြီ။ တခါမှ နားမထောင်ဘူး၊ မလိုက်ဖူး၊ အဖွဲ့နဲ့လဲ မပါဖူးပေမဲ့. သူ့ကို..ဓမ္မ ဆရာတစ်ဦးအဖြစ် လေးစားကြောင်း။
သူတို့အဖွဲ့ အခု ကပ်ရောဂါပိုး ဝင်နေပြီ သတင်းနဲ့အတူ အပြစ်တင်.ဆဲဆို စာများ. ဗွီဒီယိုများစွာ တက်လာပါတယ်။ ..ကချင်လူမျိုး များဟာ ဘုရားကောင်းကြီး အများကြီး ရကြပါတယ်။ သူများမကောင်းကြောင်းတွေ ကချင်ယုံကြည်သူများ မရေးကြပါနဲ့၊ မပြောကြပါနဲ့ ၊. ရောဂါ ဝေဒနာခံစားရသူ များအဖြစ် ထာဝရဘုရားထံ ဆုပဲတောင်းပေးကြပါ..လို့ ပြောသွားပါတယ်။.
မျှတစွာ ရေးသားတဲ့ Kham Khai ရဲ့ ပို့စ်ကိုလဲ သူမ ရှယ်ထားတာတွေ့လို့ ကော်ပီ တင်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Witmone at 5:19 AM No comments:
Labels: ဗဟုသုတ, သက္ေသခံျခင္း Testimony
COVID-19 corona virus သည် မတော်တဆ ဖြစ်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။
COVID-19 corona virus သည် မတော်တဆ ဖြစ်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်မသိဘဲ ဤကမ္ဘာကြီး၌ဘယ်အရာမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ လူသားများအားလုံး မိမိတို့၏အပြစ်မှနောက်လှည့်ရန် သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လမ်းလွဲလျက်ရှိသော ဘုရား၏သားသမီးများနောက်လှည့်ပြန်လာရန်ဖြစ်ပြီး၊
ဘုရား သခင်သည် မိုက်မဲသော အချိန်ကာလတို့ကို အမှုမထားဘူးသော်လည်း၊ ယခုမှာကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍ နောင်တ ရကြလော့ဟု ခပ်သိမ်းသော အရပ်တို့၌ ရှိသော လူအပေါင်းတို့အား ပညတ်တော်မူ၏။ (Act 17:30)
ချစ်သားတို့၊ သင်တို့သည် ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းငှါ ဤအရာများကို သင်တို့အား ငါရေး၍ ပေး လိုက်၏။ တစုံတယောက်သောသူသည် ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျှင်၊ ဖြောင့်မတ်တော်မူသော အရှင် ယေရှုခရစ်တည်း ဟူသော ငါတို့ အမှုဆောင်သခင်သည် ခမည်းတော်ထံ၌ ရှိတော်မူ၏။ (1Jo 2:1)
ထိုသခင်သည် ငါတို့၏အပြစ်မက၊ လောကီသား အပေါင်းတို့၏ အပြစ်ဖြေစရာ အကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏။ (1Jo 2:2)
ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကား၊ နှစ်သက်ဘွယ်သော အချိန် ၌သင်၏ စကားကိုငါနားထောင်ပြီ။ ကယ်တင်ရာနေ့ရက်ကာလ၌ သင့်ကိုငါမစပြီဟု လာသည်နှင့် အညီ ယခုပင် နှစ်သက်ဘွယ်သော အချိန်ရှိ၏။ ယခုပင်ကယ်တင်ရာနေ့ရက်ကာလ ရှိ၏။ (2Co 6:2)
တွေ့နိုင်သည် ကာလတွင် ထာဝရဘုရားကိုရှာကြလော့။ နီးတော်မူသည် ကာလတွင်ဆုတောင်းပဌနာ ပြုကြလော့။ (Isa 55:6)
ဆိုးသောသူသည် မိမိလမ်းကို၎င်း၊ မတရားသောသူသည် မိမိအကြံကို၎င်း စွန့်ပစ်၍၊ ထာဝရဘုရားထံသို့ ပြောင်းလဲပါစေ။ သို့ ပြုလျှင်သနားတော်မူလိမ့်မည်။ ငါတို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြောင်းလဲပါစေ။ သို့ပြုလျှင် အထူးသဖြင့် အပြစ်ကို လွှတ်တော် မူလိမ့်မည်။ (Isa 55:7)
အကြောင်း မူကား၊ ထာဝရဘုရား ကို ပဌနာပြုသောသူ ရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်း သို့ ရောက်ရကြလတံ့။ (Rom 10:13)
လူအပေါင်းတို့သည် ကယ်တင်ခြင်း သို့ ရောက်၍ သမ္မာတရားကို သိစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိ၏။ (1Ti 2:4)
Posted by Witmone at 5:17 AM No comments:
ဘုရားအသံကို ကြားနိူင်ဖို့ အတွက် (JBCS ယုဒသန်အသင်းတော် )
ဘုရားသခင် အသံတော်ကို ဘယ်လိုနားထောင်မလည်း (Cred>>Judson Baptist Church Sg)
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ ပြသနာတွေ ဆုတောင်းချက်တွေ တင်ပြပြီး ဘုရားဆီက အသံကိုတော့ နားထောင်ဖို့တော့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်က လူတွေကို စကားပြောတော့မယ် ဆိုရင် ဓမ္မာဟောင်းကျမ်းထဲမှာကတော့ ပရောဟိတ် တွေကနေ တစ်ဆင့် စကားပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓမ္မာသစ် ကျမ်းမှာတော့ ခရစ်တော် ပေးခဲ့တဲ့ သန့် ရှင်းသော ဝိဉာဉ်တော် ကနေ တစ်ဆင့် စကား ပြောပါတယ်။
ဘုရားသခင်က သင် နာကျင်စွာခံစား နေရပြီး ဘုရားကို အော်ဟစ်ပြီး ဆုတောင်းတဲ့ အချိန်မှာ သင့်ကို အလျင်းစွန့်ပစ်မထားဘူးဆိုတာကို သင့် စိတ်ထဲအမှာ အမြဲ ထားထားပါ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို အမြဲတမ်း စကားပြောချင်နေတဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က ဘုရား အသံကို နားထောင်ဖို့ အတွက် နှုတ်ပတ်တော်ကို မဖတ်ပဲနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ ဘုရား အသံကို ကြားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့် အနေနဲ့ ဘုရားအသံကို နားထောင်ဖို့ အတွက် ငြိမ်ဝပ်စွာ နေပြီး ဘုရားသခင် ဆီက အသံကိုပဲ မျှော်လင့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ပေးထားတဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ဖတ်ပြီး မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ မယ့် အစား တစ်ခြား TV, ဖုန်းတွေနဲ့ သင့် အချိန်ကို ခိုးယူဖို့ စာတန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ လောက အရာတွေနဲ့သာ သင် အချိန်ကုန် ဆုံးနေမယ်ဆိုရင် ဘုရားအသံကို ဘယ်လိုမှ ကြားနိူင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ဘုရားအသံကို ကြားနိူင်ဖို့ အတွက် လောက အရာတွေနဲ့ အချိန်ကုန်မယ့် အစား နှုတ်ကပတ်တော် ဖတ်ပြီး မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ ဖို့ ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
'ငြိမ်ဝပ်လျက်နေကြလော့။ ငါကား ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု သိမှတ်ကြလော့။ လူမျိုးတို့တွင် ငါသည် ဘုန်းပွင့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဘုန်းပွင့်မည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။ ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏။ လေးကိုချိုးလျက်၊ လှံကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်လျက်၊ ရထားကိုမီးရှို့လျက်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် စစ်မှုကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။ '
ဆာ လံ ကျမ်း။ 46:9-11
'ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနားထောင်၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၏။- ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှမနုတ်မယူရာ။- '
ရှင် ယော ဟန် ခ ရစ် ဝင်။ 10:27-28
🔍 ဖတ်ပြီး ခွန်အားရရင် တစ်ခြား ယုံကြည်သူတွေကိုပါ Share ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ 🔍
စင်ကာပူ JBCS ယုဒသန်အသင်းတော် ဖေ့ဘုတ် မှ ကူးယူပါသည်။
Posted by Witmone at 5:15 AM No comments:
စိတ်မရှည်ခြင်း လူဆိုတာကတော့ စိတ်မရှည်တဲ့ အမျိုးပါပဲ။ လှမင်းသူ
လူဆိုတာကတော့ စိတ်မရှည်တဲ့ အမျိုးပါပဲ။
ခုရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက်ချင်ကြတာ ထုံ:စံလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီမိုကရေလိုချင်တုန်းကလည်း ခုချက်ချင်းပဲလိုချင်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ်တည်တဲ့ကာလ၊ ကူးပြောင်းတဲ့ကာလ ဆောက်တည်တဲ့ကာလ တို့ကို မစောင့်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ အသေအချာနဲ့ စနစ်တကျ ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော နားမဝင်
နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးလေ။ အရေးအခင်းတုန်းက ဒေါက်တာမောင်မောင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားနဲ့ ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် မစောင့်နိုင်တော့
ဘူးလား လို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်းပဲ ယုံကြည်သူထဲမှာ စိတ်မရှည် နိုင်တာကို တွေ့ကြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုပဲ သခင်ယေရှု ကို ယုံကြည်ရင် ခုပဲ ကျမ်းမာရမယ် အနာရောဂါ ကင်းရမယ် ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ အနာရောဂါဖြစ်လာရင် ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ပဲလား၊ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလို့လား စသည်ဖြင့် စိတ်ကူး
သေချာပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင် လူသားတွေကျဆုံးခဲ့တဲ့ ဧဒင်ဥယာဉ်မှာ အာဒံနဲ့ ဧဝဟာ သူတို့အပြစ်ကြောင့် အပြစ်ပြုတဲ့ နေမှာတင် ဘုုံးဘုံးလဲကျသေဆုံးသွားတာ မဟုတကြပါဘူး။ အာဒံဆိုရင် အပြစ်ပြုတဲ့နောက် နှစ်ပေါင်း ၉၃၀ ကျော်ထိ အသက်ရှင်ပါသေးတယ်။ အပြစ်ပြုတဲ့နေမှာ
သေသွားတာဟာ သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဝိညာဉ် သေတာနဲ့၊ ဘုရားက သူ့အပေါ်လွှမ်းခြုံထားတဲ့ ဘုန်းအသရေဟာပျောက်ဆုံးသွားပြီး သူ့
ကိုယ်သူ အဝတ်ချည်းစည်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ အရင်းဆုံး စမြင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ၀ိညာဉ် ကျဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကတော့ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျမှ တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးယိုယွင်းပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်တဲ့ သခင်ယေရှုဟာ ဒီ ကျဆုံးမှုတွေကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်အတွက် ကားတိုင်မှာ အားလုံး အဖိုးအခပေးပြီး ယုံကြည်သူတိုင်းကို သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အာဒံရဲ့ သားသမီး
များဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေဟာလည်းပဲ ဇာတိပကတိပဲ ရှိနေရာကနေ ၀ိညာဉ်ပကတိကို လက်ခံရရှိလာပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သေနေတဲ့ ၀ိညာဉ်ဟာ ပြန်ရှင်လာပါတယ်။ ဘုရားမသိသူ၊ အပြစ်နဲ့ ဇာတိတွေကြောင့် သေနေသူ၊ ဟာ ရုတ်ခြည်း အသက်ပြန်ရှင်လာပါတယ်။ Born again လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ၀ိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းဟာ ယုံကြည်တဲ့ အခိုုက်အတန့်မှာတင် ပြန်ရှင်လာပါတယ်။ ဒါဖြင့် ခန္ဓာကြတော့ကော။
၀ိညာဉ်ပဲ ကယ်တင်ပြီး၊ ခန္ဓာကယ်တင်ခြင်း မရှိရင် အလကားပါပဲ။ ဒါကြောင့် သခင်ခရစ်တော်ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ခန္ဓာကယ်တင်ခြင်းကို လည္းေပးခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုကယ်တင်သလို ဆိုရင် သူထမြောက်ခဲ့တဲ့ ခန္ဓာအတိုင်း ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိညာဏ ခန္ဓာပဲ ဖြစပါတယ်။ ၀ိညာဏ ခန္ဓာ ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ မသိပေမယ့်၊ သခင်ခရစ်တော် ရှင်ပြန်ထမြောက်တုန်းကလို ခန္စာလိုမျိုးလို့ပဲ ယူဆရပါတယ်။ ၀ိညာဉ်လိုမျိုး နံရံတို့လို အတားအဆီးေတွကို ဖြတ်သွားနိုင်ပြီး၊ ခန္ဓာလိုမျိုး ထိတွေ့ကိုင်တွယ် စားသောက်နေနိုင်တဲ့ ခန္ဓာလိုမျိုး တော့ တွေးဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဝိညာဏ ခန္ဓာကိုယ် ကို ဘယ်တော့ ရကြမလဲ။
အာဒံတုန်းက ခန္ဓာကျဆုံးခြင်းက ၀ိညာဉ်ကျဆုံးခြင်း နောက်မှ တဖြည်းဖြည်းလိုက်လာသလို၊ ခန္ဓာကယ်တင်ခြင်း ဟာလည်း ၀ိညာဉ် ကယ်တင်ခြင်း နောက်မှ တဖြည်းဖြည်းလိုက်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုဟာ သေပြီးမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သလို၊ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာဟာလည်း သေပြီးမှ ဘုန်းထင်ရှားတဲ့ (Glorified Body) ကို ပြန်ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု သေတတ်သော ခန္ဓာဟာ ကောင်းကင်နိုင်ငံကို အမွေမခံနိုင်တဲ့ အတွက် ခရစ်ယာန်များ အရင် သေကြရမှာပါ။ ပုပ်ပျက်တတ်တဲ့ ဒီခန္ဓာဟာ မြေကြီးကနေလာတဲ့ အတွက် မြေကြီးကို ပဲ ပြန်သွားရမှာပါ။ ပြီးမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ြကတဲ့ အခါ မပုပ်မပျက်နိုင်တဲ့ ၀ိညာဏခနာကို ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကတော့ ပုပ်ပျက်တတ်သော ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ အတွက် တနေ့နေ့မှာ အနာရောဂါ၊ မကျန်းမမာဖြစ်ပြီး သေကြရဦးမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ လာဇရုတောင် ြပန်ရှင်ပေမဲ့ ၀ိညာဏ ခန္ဓာမရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြန်သေခဲ့ရပါတယ်။
အချို့အချို့ သော ယုံကြည်သူများဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အနာရောဂါ အပေါ် အောင်မြင်နိုင်ခြင်း တန်းခိုးကို လက်တွေ့မျက်မြင်ခံစား ခဲ့ရပြီး၊ ယုံကြည်ေပြာင်းလဲ လာကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကြပြန်တော့လည်း ဘာတန်ခိုးမှ မမြင်တွေ့ရပဲ အပြစ်တရားကနေ နောင်တရပြီး ယုံကြည်လာကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့ တေ
ယာက် မတူကြပါဘူး။ တယေက်ကို ကြတော့ ကျန်းမာပျောက်ကင်းလို့ တန်ခိုးပြပေမဲ့၊ နောက်တယောက်ကိုတော့ သဘာဝအတိုင်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ယုံကြည်သူတယောက်နဲ့ တယောက်အပေါ်ဘုရားသခင် အကြံအစည်မတူပေမဲ့၊ ယုံကြည်သူအတိုင်းအတွက် တူညီတဲ့ ကတိပေးခဲ့တာ ကတော့၊ ယုံကြည်သူအားလုံးဟာ ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ကြွလာရင် မသေနိုင်သော၊ ရောဂါကင်းသော၊ မပုပ်ပျက်သော၊ ဘုန်းတန်ခိုးရှိသော ခန္ဓာရကြမယ် ဆိုတဲ့ ကတိပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ကတိလေးကိုပဲ မျှော်လင့်ခြင်း စောင့်စားကြရအောင်လားဗျာ။ ယုံကြည်ခြင်းသည် "မမြင်ရသေးသော အရာကို သိမှတ်စွဲလမ်းခြင်း ဖြစ်၏' လို့ ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား။ အားလုံးအတွက် ပေးထားခဲ့တဲ့ သေချာတဲ့ ဒီကတိတော်ကို ပဲ စွဲကိုင် ယုံကြရင်း စောင့်စားကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းရင်း "မာရနသာ"လို့ သာ ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။
ဘုရား ရှင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
"ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါဆိုသည်ကား၊ လူအသွေးအသားသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံနိုင်၊ ပုပ်တတ်သောအရာသည် မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်ကို အမွေမခံနိုင်။ ၅၁နက်နဲသော အရာတခုကိုငါပြဦးမည်။ ငါတို့ ရှိသမျှသည် အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်။ ၅၂သို့သော်လည်း၊ နောက်ဆုံးသော တံပိုးမှုတ်သောအခါ၊ တခဏခြင်းတွင် မျက်စိတမှိတ်၌ ငါတို့ရှိသမျှ သည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ရကြမည်။ ထိုတံပိုးမှုတ်ချိန်ရောက်သောအခါ၊ သေလွန်သောသူတို့သည်၊ မပုပ်နိုင် သောအဖြစ်၌ တည်လျက်ထမြောက်၍၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ရကြမည်။ ၅၃ယခုမျက်မှောက်ပုပ်တတ်သော အရာသည် မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ ဝင်စားရမည်။ ယခုမျက်မှောက် သေတတ်သော အရာသည် မသေနိုင်သောအဖြစ်သို့ ဝင်စားရမည်။ ၅၄ဤပုပ်တတ်သောအရာသည် မပုပ်နိုင်သော အဖြစ်သို့၎င်း၊ ဤသေတတ်သောအရာသည် မသေနိုင် သောအဖြစ်သို့၎င်း၊ ဝင်စားသောအခါ၊ သေခြင်းသည် အောင်ခြင်း၌နစ်မြုပ်ပြီဟု ကျမ်းစာ၌လာချက်ပြည့် စုံလိမ့်မည်"
၁ ကော: ၁၅: ၅၀-၅၄
Posted by Witmone at 5:12 AM No comments:
နေ့စဉ်ခွန်အား ODB Our Daily Bread (All Edition FB)
All Edition ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘုတ် မှာ နေ့စဉ်ခွန်အား ODB Our Daily Bread ဝိညာဉ်ရေးစာ များကို နေ့တိုင်း ပြန်တင် ပြန်ရှယ် ပေးနေပါတယ်။ မူရင်းမြန်မာ ဝက်ဆိုဒ် www.myanmar-odb.org မှာ နည်းပညာနဲ့ အော်တ်ု နေ့စဉ် ဖော်ပြထား လို့ နေ့တိုင်း လူနဲ့ update လုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။
ODB ကို အင်္ဂလိပ် . တရုပ် စသဖြင့် ဘာသာပေါင်း များပြားစွာ ဘာသာပြန် ဝက်ဆိုဒ် တွေ ရှိပါတယ်။
မြန်မာ ODB ဝက်ဆိုဒ်မှာ စာသားများ သာမက အသံဖိုင်များပါ တင်ပေးထားလို့ အတော်လေး အဆင့်မြင့် အဆင်ပြေလှပါတယ်။
မြန်မာတွေက ဝက်ဆိုဒ် မကြည့်သူများတယ်။ ဖေ့ဘုတ်ပဲ ကြည့်တာများပြီး ဖေ့ဘုတ်က ပေးထားတဲ့ လင့်တွေကို နှိပ်ပြီး ရုပ်သံ နားမထောင်ကြပါ။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ် တခါတည်း ပေါ် လာတဲ့ ရုပ်သံ. စာသားတွေပဲ ကြည့်တာ အားသန်ကြတယ်။ လက်ရှိ ODB မြန်မာ ဖေ့ဘုတ်က ဒီလို ဝန်ဆောင်မှု မပေးနိုင်သေးလို့ All Editoon ဖေ့ဘုတ်က အတော် အသုံးကျလာပါတယ်။ မြန်မာဘာသာ. အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နဲ့ တရုပ်ဘာသာ ၃မျိုး နေ့တိုင်း တင်ပေးနေပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူ ထောင်ချီ တိုးပွား ရှိလာတယ်။
All Edition ဖေ့ဘုတ်မှာ နေ့စဉ်ခွန်အား ဘာသာ၃မျိုး စာသားတင်ပေးရုံမက ဗွီဒီယိုပါ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ၂ဘာသာနဲ့ ဗီနီယို တင်ပြထားတာ အလွန် ကောင်းလှပါတယ်။ စာသားလည်း ဖတ်နိုင်တယ်။ အသံလည်းနားထောင်တယ်။ ရုပ်သံလည်း ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။
တခြား ဝိညာဉ်ရေး မီဒီယာများလည်း ဖေ့ဘုတ်မှာ အများကြီး..အံ့သြဖွယ် တင်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ
...ODB ဗွီဒီယို ၂ဘာသာ (မြန်မာ.အင်္ဂလိပ်)
...ကျမ်းစာ တနေ့တစ်ခန်း ဗွီဒီယို
..တခါတစ်ရံ ဆရာဇော်သူလင်း. ဆရာ Andrew Saw. . စတဲ့ ဆရာများရဲ့ ဒေသနာ နဲ့ ဝိညာဉ်စာများကိုလည်း ပြန်ရှယ်ပေးနေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ပါစေ. ကောပီရိုက်ကို ထိ ပါး သလား။
မည်သို့ ဖြစ်စေ All Edition လုပ်နေတဲ့ ဆရာယော်နသန် ကို အားပေး ရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မက်ဆင်ဂျာဂရု ၃ခုလောက် လုပ်ပြီး နေ့စဉ်ခွန်အား စာများကို ပို့ပေးနေတယ်။
အခြား ကျမ်းစာလေ့လာသည့် ဗွီဒီယို လင့်အချို့ (After 25-12-2019 to today 12-1-2020.
နေ့စဉ်ခွန်အား မူရင်းဖေ့ဘုတ်က သူတို့ပေါ်လစီအရ ဝက်ဆိုက်လင့် ကို နှိပ်ခိုင်းထားပြီး ဖတ်ရှုနားဆင် ဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာပရိတ်သတ်က ဒီလိုမျိုး ခဏခဏ နှိပ်ကြည့်ပြီး နားဆင်ဖတ်ရှုတာ ထက် တချက်တည်း နားဆင်ဖတ်ရှု လိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင်း မြန်မာပရိတ်သတ် လိုချင်တဲ့ ဆားဗစ်ကို ပေးထားတဲ့ All Edition ဖေ့ဘုတ်မီာ လူကြည့်များလာခြင်း ဖြစ်တယ်။
Join ODB.Myanmar group on Messenger by visiting: https://m.me/join/AbbWXcfU8lEIRQ_D
Posted by Witmone at 4:19 AM No comments:
CDI ျမန္မာက်မ္းစာသင္တန္းေက်ာင္း(စင္ကာပူ) ........... ....အပတ္စဥ္၂ၾကိမ္ဗြီဒီယိုရွိပါသည္။
အေရွ႕ဖ်ားအသံ JESUS IS COMING FM http://www.jesuscomingfm.com/radios/southeastasianlanguages/burmese
မုရန္အီးဘုတ္ eBooks @ SlideShare
မုရန္ အစျပဳခဲ့တဲ့ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)
နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ရပ်တည်နေသူ ...
ကျွန်ုပ်သည် Ps 23.Daily (နံနက်နိုးထချိန် နှင့် ညချ...
ဘဝဆိုတာ B ဆိုတဲ့ မွေးဖွားခြင်း Born နဲ့ စတင်ပြီး D...
မုရန္မဂၢဇင္း လင့္မ်ား (Our Links)
မုရန္ဝိညာဥ္ေရး ေဆာင္းပါး၊ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာကူးယူႏိုင္ပါသည္။ မုရန္အီဇင္း အမည္ကိုေဖၚျပေပးပါက ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။ Contact: Email contact@murann.com Address: 52 Mingyi Street, Pathein, Myanmar Tel: +959451364911
ေစာတူးတူးဂ်ိမ္း သံေတာင္၊ ေနာ္ဘူေဘာေတာင္မွ သက္ေသခံခ်က္
ေတာင္ငူျမိဳ႕မွ ေစာတူးတူးဂ်ိမ္းစ္နဲ႕မေရာထုရာ ေကာ္ျပန္႕လုပ္ငန္း ေကာ္ျပန္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအစကို သံေတာင္ၾကီး ေတာင္စခန္းျမိဳ႕ကေလးအေၾကာင္းနဲ႕ စလို...
ၿမန္မာၿပည္၌ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဘုရားအမွုေတာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ သူမ်ားအားလံုး ေအာင္ၿမင္ေသာ အခြင့္ရၾကမည္မွာ မလြဲေ...
Murann Ezine added3photos andavideo . February6at 4:57am · Pathein · ဒီကေန႕ အျမင္သစ္တခုရရွိျခင္း (ဓမၼဆရာဆ...
ဆရာကံထူး သက္ေသခံခ်က္ ငယ္စဥ္က အေဖ ရြာသူႀကီး၊ တုတ္ပီးဒါးပီး တယ္။ အေမလည္း နတ္ဆရာမပဲ၊ ပထမ သားေလးေမြးတာ အေသေမြးတယ္။ ထင္းပံုေပၚ တင္ထားေတာ့ က်ီး...
လက္ေလ်ာ့၊ တိတ္ဆိတ္၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေန - ေစာပက္ထရစ္ GIVE UP, BE STILL AND SILENT
လက္ေလ်ာ့၊ တိတ္ဆိတ္၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေန - ေစာပက္ထရစ္ GIVE UP, BE STILL AND SILENT မိမိအစြမ္းအစ၊ မိမိရဲ႕ထက္ျမက္မႈ၊ ၾကိဳးစားမႈ ေတြနဲ႕အဆင္မေျပေတာ့...
က်မ္းစာေလ့လာ၊ အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျခင္း (ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း) ၁။ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ ၂။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ၃။ ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္ ၄။ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္
က်မ္းစာေလ့လာ၊ အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျခင္း (ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း) 22-Jan-2014 Thursday, 7pm ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ၾသဝါဒ) ၁။ ဘုရာ...
ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္ သမၼာက်မ္းလမ္းညႊန္မ်ား စကားခ်ီး ၁၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႕ သာသနာခရိးသြားေရာက္ရာတြင္ Re...
သင္ခန္းစာ (၂၅) ဆုေတာင္းျခင္း အဓိပၸါယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တန္ခိုး နိဒါန္း ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ အသက္တာတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းကို တန္ဘိုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲလွပ...
MSB, Myanmar Standard Bible အဖြဲ႕ (ျမန္မာျပည္)
MSB, Myanmar Standard Bible အဖြဲ႕ က ပ့ံပိုးမႈနဲ႕ တရုပ္ ထိုင္း ဘာသာျပန္ျကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၉၅ ကတည္းက ဝင္လာခဲ႕ေပမဲ႕ Database Setu...
အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ဝင္း
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တ ၂း၃၈ ေပတရုကလည္း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ...
ေလာကခရီးသည္ Prigrim's Progress. https://goo.gl/daQ9Ce.....* ဆရာေဒးဗစ္လာ+စင္ကာပူ ၂၀၁၈ https://goo.gl/ZUpwnC
ေနာက္ဆံုးကာလ-နမိတ္၄၀ https://goo.gl/Sz7E3T....* ဆရာစံတိုး-ေယရႈရဲ့ကယ္တင္ျခင္း https://goo.gl/iT7wV5.
သည္ေလာက၏ ကႏၱာရမ်ားအထဲတြင္ လွည့္လည္ေနၾကေသာ ခရီးေဖာ္မ်ားအတြက္ ..ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ငယ္ထဲမွစကားလံုးမ်ားနဲ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။ "ေတာႏွင့္လြင္ျပင္သည္ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္၊ ဆိတ္ညိမ္ေသာ အရပ္သည္လည္း ရႊင္လန္း၍ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႕ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္။ အလြန္ပြင့္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ တကြ ျမဴးတူးလိမ့္မည္။ ကႏၱာရသည္ ရႊင္ျမဴးလိမ့္မည္။ ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ လည္း ပန္းမ်ားပြင့္လိမ့္မည္။ ကႏၱာရသည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းသျဖင့္ သီခ်င္းဆို ေၾကြးေၾကာ္လိမ့္မည္"။
ေရ .... သဲကႏၱာရထဲသို႕ သြားေသာအခါ ေရ၏တန္ဖိုးကို ပို၍သိႏိုင္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀) က ယုဒျပည္ (ယခု အစၥေရးႏိုင္ငံ) တြင္ လူတစ္ဦးသည္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ၾကီး ေနာက္ဆံုးေန႕၌ ၾကီးစြာေသာအသံျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ခဲ့ပါသည္။ ေရငတ္ေသာသူရွိလွ်င္ ငါ့ထံသို႕လာ၍ ေသာက္ေလာ့၊ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲမွ အသက္ေရသည္ စမ္းေခ်ာင္းသဖြယ္ စီးထြက္ေနလိမ့္မည္ ..ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ .. https://goo.gl/wOUOnb
မုရန္ဝိညာဥ္ေရး ေဆာင္းပါး၊ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာကူးယူႏိုင္ပါသည္။ မုရန္ အမည္ကိုေဖၚျပေပးပါ. Simple theme. Powered by Blogger.